အန်သိုနီ Scaramucci(အန်သိုနီ Scaramouch)virtual ကမ္ဘာ့ virtual ငွေကြေး၊ cryptocurrency၊ နိုင်ငံတကာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါ်တယ် website ｜ GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ကို virtual ငွေကြေးနှင့် altcoins စာရင်း
ကြိုး(ကြိုး – USDT)
တိတ်ဆိတ်(တိတ်ဆိတ် – XRP)
Bitcoin ငွေသား(Bitcoin ငွေသား – BCH)
ကွင်းဆက်လင့်(အချစ် – LINK)
Binance အကြွေစေ့(Binance ဒင်္ဂါးပြား – BNB)
Crypto.com ကွင်းဆက်(Crypto.com ဒင်္ဂါးပြား – CRO)
အလင်းရောင်အကြွေစေ့(Litecoin – LTC)
Cardano[Ada](Cardano – ရှိသည်)
အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြွေစေ့(အမေရိကန်ဒေါ်လာဒင်္ဂါးပြား – USDC)
အိုကေအကြွေစေ့[အိုကေအကြွေစေ့](OKEX အကြွေစေ့ – ကုလသမဂ္ဂ)
Monero(ငွေကြေး – XMR)
Stella Rumen(ကြယ် Lumens – XLM)
လီယို[Leo တိုကင်](တစ်ယောက်တည်း LION အမှတ်အသား – လီယို)
အမြင့်ဆုံး / နိမ့်ဆုံး / စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်
စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ် / ငွေပေးငွေယူအသံအတိုးအကျယ်
အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါအမျိုးအစားမခွဲခြားထားသောblock ကွင်းဆက်BTC(Bitcoin)စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေSkyBridge Capital(Skybridge မြို့တော်)JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ(JP Morgan Chase)BloombergBitcoin(BTC) ဇယားဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေETF(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု)Wall Street(Wall Street)ဆွစ်ဇာလန်WEF(ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်)ဒက်ဘစ်ကဒ်မိုဘိုင်း appETH(Ethereum)XLM(Stella Rumen)LTC(အလင်းရောင်အကြွေစေ့)ETC(Ethereum ဂန္ထဝင်)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်ဘဏ် | ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ | နိုင်ငံ / နိုင်ငံencryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုများ | နည်းပညာ / နည်းပညာ / အိုင်တီ / ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် | ဖြစ်ရပ်များ / ဖိုရမ်များ / အစီအစဉ်ဘဏ္economyာရေးစီးပွားရေး | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီး၊ ဘဏ္Productsာရေးထုတ်ကုန်များ၊ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | သုတေသန | သုတေသနဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း / နည်းပညာ / အခြေခံများ / ကုန်သွယ်မှုဘဏ္financialာရေး | ငွေပေးချေမှုစနစ် / လွှဲပြောင်း / သိုက် / ငွေထုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ကော်ပိုရေးရှင်း | ကုမ္ပဏီဇာတ်ကောင် | စီအီးအို / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အရင်းရှင်၊ ကျော်ကြားသူ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုSEBA(SEBA ဘဏ် AG)F2f(အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု)အင်္ဂလန်ပြင်သစ်ဂျာမနီသြစတြီးယားပေါ်တူဂီနယ်သာလန်စင်္ကာပူဟောင်ကောင်အီတလီencryption ငွေကြေးကို | Cryptocurrency ချိန်း / အရောင်းရုံး / ချိန်း / ပလက်ဖောင်းDeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)လျှပ်စီးကွန်ယက် node ကိုBlack ကမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု LLC(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု)မBlဲဘလိတ်(Matthew Break)Guy Schwarzenbach(Geishwarzenbach)Guido Buehler(Guido Buehler)မှ Ian Simpson(မှ Ian Simpson)အာဂျင်တီးနားအီဂျစ်ဂျင်းမာ့ခ် Bonnefoux(Jean-Marc Bonuf)အစုစုမတည်ငြိမ်မှုလေ့လာသုံးသပ်သူအရှိန်အဟုန်ကုန်သည်ကုန်သည်မီးခိုးရောင်စကေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ(မီးခိုးရောင်)RSINikolaos Panigirtzoglou(Nikolaos Panigilt Zoguru)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘဏ္Economicာရေးစီးပွားရေးသတင်း | ကော်လံ / ခေါင်းစဉ်အန်သိုနီ Scaramucci(အန်သိုနီ Scaramouch)လက်ကျန်ငွေမက်ဆာချူးဆက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံကုမ္ပဏီ(အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံ)Ruffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ(Raffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု)ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်(ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်)Stanley Printmiller(Stanley Dracken ကြေးမုံ)ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်(ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်)ကွမ်တမ်ရန်ပုံငွေ(ဆိုးရော့စ်ရန်ပုံငွေ)Jim Cramer(Jim Kramer)ရင်ပြင်MicroStrategy ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း(Micro မဟာဗျူဟာ)Cypherpunk Holdings Inc.(cipher ပန့်ခ် Holdings က)သတ္တုတွင်းသတ္တုတွင်းရေကန်နေ့(လေလံဇယားကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်)PayPalနယူး Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု(COVID-19)ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများMasterCardဗီဇာဒံယလေက H Schulman(ဒံယလေက Schulman)အဲဖရက် F ကိုကယ်လီ(အဲဖရက်ကယ်လီ)BCH(Bitcoin ငွေသား)S&P 500(စံ & ညံ့ဖျင်းသည် 500 စတော့အိတ်ညွှန်းကိန်း)NasduckCashAppCME(ချီကာဂိုကုန်သွယ် Exchange)XRP(တိတ်ဆိတ်)Binance(Binance)Cross Tower(လက်ဝါးကပ်တိုင်မျှော်စင်)တိုကင်CryptocurrencyOSL(OSL)Beaxy ချိန်း(Beak Sea Exchange)Anderson က P.C. သတ်(ဥပဒေရုံး Anderson ကသတ်)Hailey Lennon(Haley Lennon)SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်)ပလက်ဖောင်းBrad Garlinghouse(သွေး Garling အိမ်)ခရစ် Larsen(ခရစ် Larsen)လုံခြုံရေးစျေးနှုန်းကျဆင်းမှု / ကျဆင်းခြင်း / ကျဆုံးခြင်းသတိပေးချက်စျေးနှုန်းများမြင့်တက် / မြင့်တက် / မြင့်တက်၏သတိပြုပါOTC(ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော)ကြီးစိုးမှု
ကမ္ဘာ့ Virtual ငွေကြေး / Cryptographic ငွေကြေး / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ၀ ဘ်ဆိုဒ် | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
"Cryptocurrency- Virtual ငွေကြေးစျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံး - ထ - နှုန်းသည် | အနိမ့်ဆုံး - Crash- စျေးတိုးမှုနှုန်း | "စျေးကွက်တန်ဖိုး - ပမာဏ - အရောင်းအ ၀ ယ်ပမာဏပမာဏ Real-time Rank" အတွက်ဒီမှာနှိပ်ပါ
ဇာတ်ကောင် | စီအီးအို / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အရင်းရှင်၊ ကျော်ကြားသူ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု
အန်သိုနီ Scaramucci(အန်သိုနီ Scaramouch)
ယူအက်စ်တွင်အကြီးမားဆုံးသော US Sky Bridge ဖြစ်သည်(SkyBridge) Virtual ငွေကြေးကို Bitcoin Fund စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး SEC တွင်လျှောက်ထားခဲ့သည်
ယူအက်စ်တွင်အကြီးမားဆုံးသော US Sky Bridge ဖြစ်သည်(SkyBridge) cryptocurrency Bitcoin ရန်ပုံငွေကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Wall Street ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအိမ်ဖြူတော်ဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဟောင်းအန်တိုနီ Scaramucci ၏ SEC ၏ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောခြံရံရန်ပုံငွေသို့လျှောက်ထားခဲ့သည်။、Skybridge မြို့တော်、အသစ်တစ်ခုကို Bitcoin (BTC) ရန်ပုံငွေစတင်ရန်、ယူအက်စ်လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သူထံတရားဝင်လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်လွှာအတွက်ပုံစံ D、အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုတနင်္လာနေ့တွင် Securities and Exchange Commission ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ခဲ့သည်、စာရွက်စာတမ်းအရ "SkyBridge Bitcoin Fund L.P. " ကိုထုတ်ပေးသူအဖြစ်နှင့် "SkyBridge Bitcoin Fund GP LLC" ကိုသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။、အဆိုပြုထားရန်ပုံငွေဖြစ်ပါတယ် “စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ “Skybridge သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၏ပမာဏကိုကြေငြာရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်、တစ် ဦး ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်. ကင်းလွတ်ခွင့်、တနည်းအားဖြင့် Skybridge Capital မှအဆိုပြုထားသည့် Bitcoin ရန်ပုံငွေသည်ဖြစ်သည်、ဤလျှောက်လွှာသည်ဆိုလိုသည်မှာအသိအမှတ်ပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသာရရှိနိုင်သည်、ကောင်းကင်တံတား […]
Cryptocurrency / Cryptocurrency နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ
Bitcoin(BTC) စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မကြုံစဖူး "လွန်ကဲစွာရောင်းဝယ်သော" အဆင့်သို့ ၀ င်ရောက်နေသော်လည်းတိုးတက်မှုနှင့်ထိုးဖောက် ၀ င်ပေါက်မှုဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည့်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်တရားစီရင်ချက်အညွှန်းကဘာလဲ။
[Crash] Cryptocurrency BTC (Bitcoin) စျေးနှုန်းသည် $ 33,000 Bitfinex ၏အရေးပါသောထောက်ပံ့မှုအောက်တွင်ရှိသည်(Bitfinex)ရာထူးတိုတိုသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်
[ဒဏ္Myာရီပြိုကျခြင်း] တစ်ရက်အတွင်း ၁ / ၄.၂ ဘီလီယံသို့ကျဆင်းသွားသောသမိုင်းဝင်ပြိုကျမှု "Iron Titanium (TITAN)" ၏ virtual ငွေကြေး၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအလဟ crisis ဖြစ်ရပ်၏ဒဏ္myာရီပြိုကျမှု
US Tesla Bitcoin(BTC)ငွေပေးချေမှု၊ EV ငွေပေးချေမှုကို Mr. Elon Musk ကဆိုင်းငံ့လိုက်သည်(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို) "သတ္တုတူးဖော်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှု"
စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀ (ယန်း ၁၁ ထရီလီယံ) အဓိကငွေကြေးလဲလှယ်မှု "Coinbase" သည် NASDAQ ၏စာရင်းဝင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုသမိုင်း
Bitcoin(BTC)ဝေလငါးများ (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) သည်ငွေအမြောက်အမြားကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူနေကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုအမှာစာအများဆုံးဝယ်ယူကြသည်။
Bitcoin [စံချိန်မြင့်မားသောအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်](BTC)Cryptocurrency သည် ၅၆၀၀၀ ဒေါ်လာဖြင့်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ cryptocurrencies သည်တစ်ပတ်အစတွင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်လော။ altcoin တက်လိမ့်မည်နည်း
Ethereum စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်(ETH)ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာ ၇၀ ဘီလီယံကျော်လွန်ခဲ့ပြီးစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်
[Cryptocurrency ပူဖောင်းကွဲ! ?? ] Bitcoin(BTC)ထိုးဖောက်!! 2ရက်ပေါင်း ၂၆% အထိကျဆင်းသွားသည်!! Cryptocurrency စန်းပွောငျးလဲ
[ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်း] ငွေလဲလှယ်မှုစတင်ရန်စတင်ချိန်တွင် ၂၄ နာရီအတွင်း XRP စျေးနှုန်းသည် ၂၄% ကျဆင်းသွားပြီး cryptocurrency exchange Binance သည် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။
၎င်းသည်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်သောကြောင့်အဆင့် သတ်မှတ်၍ မရပါ
Cryptocurrency curation site ကို
"ကမ္ဘာ့ Virtual ငွေကြေး / စာလုံးသုံးငွေကြေး / နိုင်ငံတကာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ဝဘ်ဆိုက်"
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဟဇာတကို virtual ငွေကြေး, cryptocurrency, blockchain, လူမှုမီဒီယာအမျိုးအစားပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်ပေါ်တယ် site ကို
crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ပြည့်စုံသောသတင်း site, ကမ္ဘာ့သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်အခြေစိုက်စခန်း(ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ site ကို)အဓိက virtual virtual ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမည်များ, အမျိုးအစားများ, ဝိသေသလက္ခဏာများ, ရာထူး, ပြောင်းလဲမှုနှုန်း, ငွေဖြစ်လွယ်, စျေးနှုန်းများ, ဝယ်ယူမှုနည်းလမ်းများ, စျေးကွက်တန်ဖိုး, Real-time ဇယား, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်, etc ။ Blockchain နည်းပညာ / နည်းပညာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအရောင်း / ရောင်း / ရောင်းချ ဆောင်းပါး၊ ဆောင်းပါး၊ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြန့်ဝေခြင်းအား cryptocurrencies ၏သတင်းဆိုက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးဝင်သောသတင်းများ၊
virtual ငွေကြေး / crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါ်တယ် site ကို
ငါရွှေထက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ Bitcoin မဝယ်သင့်သလဲ? ယခု Wall Street တွင်အပူဆုံးဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်!
ငါရွှေထက် Bitcoin ဝယ်သင့်သလဲ? ယခု Wall Street တွင်အပူဆုံးဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်!
ကို virtual ငွေကြေး Bitcoin စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးနှိပ်အတူ、အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်များစွာသောရွှေကိုရွှေမှထုတ်ယူနေကြသည်
ဒါကတိုက်ဆိုင်ရုံလား။、သို့မဟုတ်ပါက virtual ငွေကြေးနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုစျေးကွက်များအပေါ်အလေးအနက်သက်ရောက်မှုရှိသောအလှည့်အစတစ်ခုလား။、သေချာမသိဘူး、Bitcoin သည်နောင်အနာဂတ်တွင်ရွှေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်မလား、အငြင်းအခုန်ကွဲနေတယ်
သို့သော်、ယခုဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည် Bitcoin သည်တစ်နေ့လျှင်ငွေဖောင်းပွမှုနှင့်ငွေဖောင်းပွမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ရွှေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်သည်။、အပူ
ဒီနှစ် 150% မြင့်တက်သော Bitcoin, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျဆင်းခဲ့သည်、3လကတည်းကအများဆုံးကျဆင်းမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်、၎င်းသည်ယေဘုယျရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတွန့်ဆုတ်စေသည့် Bitcoin ၏မတည်ငြိမ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
ယခု Wall Street တွင်အပူဆုံးဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်!
Virtual ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Jean-Marc Bonufu "ရွှေသည်တစ်ချိန်ကကမ္ဘာနှင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်လုံခြုံသောနေရာဖြစ်ခဲ့သည်、အခုတော့ Bitcoin လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အစားထိုးနေပြီ။ "
သို့သော်、အကယ်၍ အထွေထွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသိမ်းဆည်းထားသောငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်နည်းနည်းအကြွေစေ့လုပ်ငန်းသို့စတင်ရွေ့သွားလျှင်、ဒါဟာ Wall Street ၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးမဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်
Commodity Hedge Fund မန်နေဂျာဟောင်း、လက်ရှိတွင် virtual ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Jean-Marc Bonufu、ရွှေသည်တစ်ချိန်ကကမ္ဘာနှင့်ကလေးငယ်များအတွက်လုံခြုံရာနေရာဖြစ်ခဲ့သည်、အခုတော့ Bitcoin လိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရပြီ။ "
Bitcoin ထက်ရွှေ, လုံခြုံပိုင်ဆိုင်မှု၏ရှငျဘုရငျ(ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ)ငါဝယ်သင့်သလား?
၎င်းသည်ယေဘုယျရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားကြီးမားသောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဖြစ်သော်လည်းမကြာသေးမီကရန်ပုံငွေပမာဏနှင့်စီးဝင်မှုနှုန်းကိုကြည့်လျှင်ပင် Bitcoin(ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ)အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ၀ ယ်လိုအားတိုးပွားလာခြင်းတို့ဖြင့်အစုရှယ်ယာများနှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာထိန်းသိမ်းရေးတွင်ထည့်သွင်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
bitcoin ကိုဝယ်ခြင်းငှါရွှေနှင့်ဆက်စပ်သောစာရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု (ETF) ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရောင်းချခြင်း
JP Morgan Chase မှလေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားသည်、မိသားစုရုံးများနှင့်အခြားရန်ပုံငွေများ、နည်းနည်းဒင်္ဂါးများကို ၀ ယ်ရန်အတွက်၎င်းသည်ရွှေနှင့်ဆက်စပ်သောစာရင်းဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု (ETF) ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချနေသည်ဟုဆိုကြသည်။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများက Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမော်တော်ယာဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်မျက်နှာသာပေးသော Grayscale Bitcoin Trust၊、8၎င်းသည်လ၏အစပိုင်းတွင်ဒေါ်လာစျေးထက်နှစ်ဆကျော်တက်ခဲ့သည်
NASDAQ တွင်စာရင်းပြုထားသောအဓိကငွေကြေးလဲလှယ်မှု "Coinbase"
202114ပြီလ ၁၄၊ ၂၀၁၄ အမေရိကန် Coinbase သည် Nasdaq တွင်စာရင်းပြုခဲ့သည်
အမေရိကန်၏အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်သည့် Coinbase Global သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၁၄ ရက်တွင် NASDAQ တွင်စာရင်းဝင်မည်ဖြစ်သည်。
202114ပြီ ၁၄ ရက်၊、"Coinbase Global" သည် United States တွင်အကြီးဆုံး crypto asset (virtual ငွေကြေး) လဲလှယ်မှုဖြစ်သော US Securities Dealers Association Nasdaq ဖြစ်သည်။(နာဆာ)စာရင်းသွင်းသည်。
အမေရိကန်၏အကြီးဆုံး crypto ပိုင်ဆိုင်မှု (virtual ငွေကြေး) လဲလှယ်
Coinbase Global သည်အမေရိကန်စတော့အိတ်ချိန်းရောင်းဝယ်သူများအသင်း Nasdaq ဖြစ်သည်(နာဆာ)စာရင်းသွင်းသည်
ပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်ရှိစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများအပေါ်အခြေခံထားသည့် Coinbase ၏စာရင်းမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည်။、ကုမ္ပဏီ၏မျှော်လင့်ထားသည့် ၀ င်ငွေနှင့်ဈေးကွက်အရင်းအနှီးများ、Citigroup、မော်ဂန်စတန်လေ、ထိုကဲ့သို့သော BlackRock အဖြစ်အဓိကဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းများထက်ကျော်လွန်。
2012၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအမေရိကန်၏အကြီးဆုံး crypto ပိုင်ဆိုင်မှု (virtual ငွေကြေး) လဲလှယ်မှုဖြစ်သော US Coinbase、ငွေလဲလှယ်ခြင်းကို သုံး၍ ငွေပေးငွေယူများအတွက် ၀.၅၇% ငွေပေးငွေယူကောက်ခံပြီးပါပြီ။。စျေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီ Market Watch အရသိရသည်、2020ယခုနှစ်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁.၁ ဘီလီယံ (စုစုပေါင်းငွေလွှဲတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁၉၃ ဘီလီယံ) ဖြစ်သည်။、ယင်းတို့အနက်ငွေပေးငွေယူခသည် ၈၆% ရှိသည်။。
ငွေနှင့်စျေးကွက်အရ、US Coinbase ၏အစုရှယ်ယာ ၁၁၅ သန်းကိုအများပြည်သူအတွက်ကမ်းလှမ်းသည်、2တစ်ရက်အကြာအခြေစိုက်စခန်းစျေးနှုန်း $ 200 ဖြစ်ခဲ့သည်。သို့သော်、စာရင်းမတိုင်မီလေးတွင်ကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၈၅ ဘီလီယံမှဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံအထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။、အခြေစိုက်စခန်းစျေးနှုန်းလည်းမြင့်တက်နေသည်。
Cleo Capital မှ Sarah Kunst ၏မှတ်ချက်
"Coinbase ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသောကုမ္ပဏီအတွက်မမြင့်မားပါ။ "
Cleo Capital(Cleo Capital)Sarah Kunst(စာရာအနုပညာ)21ပြီလ 2, 2021 ဖြစ်ပါတယ်、Bloomberg ကိုဆန့်ကျင်、Coinbase ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသောကုမ္ပဏီအတွက်မမြင့်မားပါ。
US Coinbase တွင်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အလားအလာရှိသည်
Coinbase စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်း、၎င်းသည် Bitcoin (BTC) ၏စျေးနှုန်းနှင့်ခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုရှိသည်ဆိုပါစို့။。
အောက်ပါဇယားတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း、Bitcoin (BTC) စျေးနှုန်းများနှင့်အမေဇုန်နှင့်တက်စလာကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုမြင့်မားသောစတော့များဖြစ်သည်、Chicago Mercantile Exchange (CME) နှင့် Nasdaq စသောရိုးရာလဲလှယ်ရေးစတော့များနှင့်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုသည်အဘယ်နည်း။、မမှန်နှင့် uncorrelated ဖြစ်ခဲ့သည်。
Chicago Mercantile Exchange (CME)၊ Nasdaq စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအစဉ်အလာလဲလှယ်ရေးစတော့ရှယ်ယာနှင့်ရက်ပေါင်း 90 ဆက်စပ်မှု
သို့သော်、US Coinbase သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်、နည်းပညာ၏တိုးတက်မှုအလားအလာနှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစား、စာရင်းလုပ်သည့်အချိန်တွင်ပုံမှန်ညွှန်းကိန်းများထက်တက်စလာနှင့်အမေဇုန်ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်。
တစ်နည်းပြောရရင်တော့、US Coinbase ၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀၀ ကျော် (ယန်း ၂၂ ထရီလီယံခန့်)、ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းဈေးကွက်အရင်းအနှီး ၅၀ တွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်မထူးဆန်းပါ။。
ဒါ့အပြင်、crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်、အသုံးပြုသူအရေအတွက်က linear တိုးတက်မှုနှုန်းမပြထားဘူး。ကွန်ယက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်、အဆကြီးထွားပါလိမ့်မယ်。တစ်နည်းပြောရရင်တော့、2021အတည်ပြုသည့်အသုံးပြုသူအရေအတွက် (Coinbase အကောင့်ရှိသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်) သည်ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင်ယခင်သုံးလပတ်မှ ၃၀% ကျော်အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။、အလားအလာရှိသောတန်ဖိုးကိုအလွန်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသထားတယ်。
ဒါပေါ့、ဤရွေ့ကားထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဉာဏ်ကိုမရှိကြပေ。၎င်းသည် Deliveroo ကဲ့သို့ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ စျေးနှုန်းမြင့်လွန်းနေပြီးစာရင်းပြီးနောက်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားနိုင်သည်။。
သို့သော်、မဖြစ်နိုင်ဘူး。ဒါ、၎င်းသည်တိုက်ရိုက်စာရင်းပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲကန ဦး အများပိုင်ရောင်းချခြင်း (IPO) မဟုတ်ပါ、အကြောင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်များသည်ရည်မှန်းချက်ကြီးသောစျေးနှုန်းများကိုမသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်。တိုက်ရိုက်စာရင်းအကြံပေးများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်、ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးပါ、IPO အကြံပေးသည်ရရှိငွေ၏အချို့ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးသည်。
US Coinbase သည် National Securities Dealers Association Nasdaq ဖြစ်သည်(နာဆာ)စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်သောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အန္တရာယ်အချက်များကားအဘယ်နည်း။
US Coinbase သည် National Securities Dealers Association Nasdaq ဖြစ်သည်(နာဆာ)စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းတင်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကားအဘယ်နည်း။
သို့သော်、US Coinbase သည် National Securities Dealers Association Nasdaq ဖြစ်သည်(နာဆာ)စာရင်းပြုသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အန္တရာယ်အချက်များလည်းရှိပါတယ်。
မည်သို့ပင်စာရင်းပြုစုပြီးနောက်စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းမှဖြစ်ပျက်၏、4မေလ ၁၄ ရက်သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်。ဖြစ်ကောင်း、crypto ပိုင်ဆိုင်မှု၏သမိုင်း၌တည်လိမ့်မည်。
စျေးကွက်ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှအမြတ်အစွန်းများသည် ၉၈% အထိကျဆင်းနိုင်သည်
1,000အဆိုပါ $ သန်း 100 စတော့ရှယ်ယာအဘိုးပြတ်、ဒါဟာအတော်လေးငွေပမာဏပါပဲ。
Coinbase မှာအကောင့် ၄၃ သန်းရှိတယ်။、ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများမှာဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်。
သို့သော်ငြားလည်း、အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော Charles Schwab တွင်အကောင့် ၃၁.၅ သန်းရှိသည်、စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှု9ထရီလီယံယန်း、ဖောက်သည်တစ် ဦး လျှင်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် Coinbase ထက်သုံးဆပိုများသည်。ဤသည်ကိုအသစ်စက်စက်တည်ထောင်ထားသောကုမ္ပဏီထံမှများစွာမျှော်လင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။、ဒါဟာအလွန်မြင့်မားသောအတားအဆီးပါပဲ။。
MarketWatch, ဘဏ္newsာရေးသတင်းနှင့်စျေးကွက်ဒေတာအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး(စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေး)လေ့လာသုံးသပ်သူများလည်း、စာရင်းဖွင့်သည့်အချိန်တွင်ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀ မရောက်ရှိခဲ့ပါ、အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာဒေါ်လာ ၁၈.၉ ဘီလီယံခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်。
စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေး(စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေး)အဆိုအရ、Cryptocurrency ဝေးနေဆဲဖြစ်သည်、စျေးကွက်ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှပြန်လာနှုန်းမှာ ၉၈% အထိကျဆင်းသွားနိုင်သည်။。
US coinbase (Coinbase) သည်အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနိုင်သော်လည်းလုံခြုံရေးကုဒ်မှာ "COIN" (coinbase ticker symbol) ဖြစ်သည်။、ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည်အလျင်စလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်、နှင့်စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့(စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေး)လေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားသည်。
Bitcoin(BTC)ထိုးဖောက်!! 2ရက်ပေါင်း ၂၆% အထိကျဆင်းသွားသည်!! Cryptocurrency စန်းပွောငျးလဲ
စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်မရှည်မှုတို့ပျံ့နှံ့နေသော Cryptocurrency ဈေးကွက်သည် virtual ငွေကြေးပူဖောင်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြိုလဲနိုင်သည်။
Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုများ (virtual ငွေကြေး) "Bitcoin(BTC)၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်、crypto bubble သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပေါက်ကွဲနိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်မှုများတိုးများလာနေသည်။。
ဒီ Bitcoin(BTC)ကျဆင်းမှုနှုန်းသည် virtual ငွေကြေးပူဖောင်းကိုဆိုလိုသလား။ ??
Bitcoin(BTC)စျေးနှုန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်လေးဆကျော်ခဲ့သည်、2017ယခုနှစ်စိတ်အားထက်သန်မှုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲကျဆင်းခြင်းကိုအမှတ်ရစေသည်、2021၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင်ဒေါ်လာ ၄၂၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်。
ဒါက virtual ငွေကြေးပူဖောင်း၏ပြိုကျလား? ??
Bitcoin(BTC)2021, ဇန်နဝါရီလ 10-11, မှ 26% အထိကျလိမ့်မည်、၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မတ်လမှစ၍ နှစ်ရက်အတွင်းအကြီးမားဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်သည်။。
ဥရောပကုန်သွယ်နာရီအတွင်းအချို့ကျဆင်းမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးပြီးနောက်、အဆိုပါလျှော့နောက်တဖန်အရှိန်、နယူးယောက်ကုန်သွယ်ရေးနာရီအတွင်း ၂၀% ကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်。
Bitcoin(BTC)ဈေးကွက်အရင်းအနှီး、2021ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှစ၍、ဒေါ်လာ ၁၈၅ ဘီလီယံ (ယန်း ၁၉.၃ ထရီလီယံခန့်)。
ဒီ Bitcoin(BTC)ကျဆင်းမှုနှုန်းသည် virtual ငွေကြေးပူဖောင်းကိုဆိုလိုသလား။ ?? တစ် ဦး ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များအကြားစိုးရိမ်မှုများတိုးများလာနေသည်。
Mirror Tabak ၏အဓိကစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ Matt Murray(Matt Murray)အဓိပ္ပါယ်ရှိသောမှတ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။
Mirror Tabak ၏အဓိကစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ Matt Murray(Matt Murray)"ဒါက parabolic လှုပ်ရှားမှုပါ၊ ဒီလို parabolic လှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှာပါ။ "。
Bitcoin(BTC)န်းကျင် $ 32.900 မှ 14% ကျဆင်းသည်
0:51 pm အချိန်နယူးယောက်အချိန်၏အဖြစ်、Bitcoin(BTC)န်းကျင် $ 32.900 မှ 14% ကျဆင်းသည်。
JP Morgan Bitcoin သည် overbought ဖြစ်သော်လည်းရွှေဖြစ်သည်(ရွှေ)မှရန်ပုံငွေတက်စို့ဖို့ဟောကိန်းထုတ်
JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)လေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားသည်、အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဆက်လက်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်、အဆိုပါအလားအလာ rosy နှင့်အီရန်ဖြစ်ပါတယ်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Bitcoin (BTC) ၏စျေးနှုန်းကိုတွန်းအားပေးနေနိုင်သည်、နှင့် JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)နယူးအစီရင်ခံစာပြောဆိုထားသည်
Bloomberg မှ ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင်မှတ်ချက်ပြုသည်、JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)Nikolaos Panigilt Zogru ဦး ဆောင်သည့်မဟာဗျူဟာသည် Bitcoin တွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အနာဂတ်အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာမီကခန့်မှန်းချက်များထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
JP Morgan "Bitcoin သည် “အလွန်အကျွံဝယ်”」
JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)အဆိုအရ、ယခုလအတွက်ရန်ပုံငွေများများပြားလာခြင်း、စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်ဆက်လက်ရမည်ဖြစ်သည်
မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းတိုးနှင့်ဆက်စပ်သောသီအိုရီ、Institutional ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ Over-the- ကောင်တာဝယ်、ရရှိနိုင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတက်စို့ပါဝင်သည်
ဒါကိုငွေဖြစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်းလို့ခေါ်တယ်、အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှစိတ်သဘောထားသည်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ဟုဆိုကြသည်။、ယခုအပတ်လေ့လာသုံးသပ်သူတစ် ဦး ကဤသံသရာသည် Bitcoin ရှိနွားစျေးကွက်ကိုအကန့်အသတ်မရှိလောင်စာဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
သို့သော်、JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)အဘို့、ဝယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်：သင်အရှုံးကိုရှောင်ရှားရန်အရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်
အခုပဲ、131Grayscale အကြောင်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲသောအမေရိကန် cryptocurrency ရန်ပုံငွေ、သူတို့က、အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စီးဆင်းမှုပမာဏသည်အလွန်ကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်、"အရှိန်အဟုန်ကုန်သည်တွေကိုရာထူးပြန်ပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုတာကအရမ်းကြီးတယ်、တည်မြဲတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစျေးနှုန်းကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူး။ "
သော်လည်း、Bitcoin ၏ဆွေမျိုးအင်အားအညွှန်းကိန်း (RSI) သည် ၇၀ အထက်မြင့်တက်ခဲ့သည်、၎င်းနောက်လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၂၄၀၀၀ ၀ န်းကျင်တွင်အလွန်အကျွံဝယ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။、တနင်္လာနေ့စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်、RSI ဒီတံခါးခုံကိုအောက်တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်
JP Morgan က "Bitcoin ဆိုတာက" “အလွန်အကျွံဝယ်”မြင်ကွင်းကိုပြသည်
ဘဏ္Kingdomာရေးနိုင်ငံတော်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်ရှိသောဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များသည် Bitcoin ခေတ်အပိုင်း ၁ သို့ပြောင်းလဲနေကြသည်
SEBA ကိုဆွစ်ဇလန် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်、နိုင်ငံပေါင်း ၉ နိုင်ငံတွင် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များအကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Crypto Asset Bank(Cryptocurrency ဘဏ်)SEBA ဘဏ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်、၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်နိုင်ငံသစ် ၉ ခုတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
နိုင်ငံအသစ်ကိုးနိုင်ငံကဘာတွေလဲ။、အင်္ဂလန်、ပြင်သစ်、ဂျာမနီ、သြစတြီးယား、ပေါ်တူဂီ、နယ်သာလန်、စင်္ကာပူ、ဟောင်ကောင်、အီတလီမှာ、SEBA ဘဏ်သည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် crypto asset service ကိုစတင်ခဲ့သည်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဇူးရစ်မြို့ရှိ SEBA ဘဏ်တွင်ဖြစ်သည်、crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအပြင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်း、Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကျောထောက်နောက်ခံပြုငွေကြေး
crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားဝင်ငွေကြေးဖြင့်လဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်
Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ Bitcoin ကိုကိုင်တွယ်、Ethereum、Stella、အလင်းရောင်အကြွေစေ့、Ethereum Classic အမှတ်တံဆိပ် ၅ ခု
ကျနော်တို့ကိုင်တွယ်သော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ、Bitcoin、Ethereum、Stella、အလင်းရောင်အကြွေစေ့、Ethereum Classic အမျိုးအစား ၅ မျိုး
SEBA သည်ယခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ဆွစ်ဘဏ္Financialာရေးစျေးကွက်ကြီးကြပ်ရေးရုံးမှဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များရရှိခဲ့သည်、11မေလကနေ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ်လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်
SEBA、စျေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် "crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများပြန့်ပွားရန်လမ်းဖွင့်ပေးသည်။ "
XRP(တိတ်ဆိတ်)၂၄ နာရီအတွင်း ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်
XRP(တိတ်ဆိတ်)၂၄ နာရီအတွင်း ၂၄% ကျဆင်းသွားသည်
XRP(တိတ်ဆိတ်)စျေးနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်အတွင်း Binance ဖြစ်သည်(Binance)41% ကျဆင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှတစ်ခုသည်စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားသည်
Ripple နှင့် ပတ်သက်၍ US Securities and Exchange Commission ၏တရားစွဲဆိုမှုကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်၊、အချို့လဲလှယ်မှုများသည် XRP ရှိပြီးဖြစ်သည်(တိတ်ဆိတ်)virtual ငွေကြေးစျေးကွက်တွင်ကြီးမားသောမငြိမ်မသက်မှုတစ်ခုရှိသည်
Ripple အားအမေရိကန်လုံခြုံရေးနှင့်ချိန်းကော်မရှင်၏တရားစွဲဆိုမှုသတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်、XRP(တိတ်ဆိတ်)စျေးနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်အတွင်း Binance ဖြစ်သည်(Binance)၄၁% အထက်ကျဆင်းသွားတယ်
CoinMarketCap အရ、လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း XRP တိုကင်များ၏တန်ဖိုးသည် ၄၂% ကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်、ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ၀.၇၆ ဒေါ်လာအမြင့်ဆုံးသို့ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။
လောလောဆယ် ၀.၂၅ ဒေါ်လာသာရှိသည်
ရလဒ်အနေဖြင့်、အချို့သောအသေးအဖွဲဖလှယ်မှုများသည် XRP ရှိသည်(တိတ်ဆိတ်)ကုန်သွယ်မှုမပြုနိုင်ခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုင်ဆောင်သူများနှင့် FX ကုန်သည်များအတွက်သိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။
သ、3အသေးစား Virtual ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှစ်ခု - OSL(OSL)、Beaxy ချိန်း(Beak Sea Exchange)、Cross Tower(လက်ဝါးကပ်တိုင်မျှော်စင်)-Is、ယာယီကုန်သွယ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းရှိမရှိ、XRP(တိတ်ဆိတ်)ကုန်သွယ်မှုပြfromနာမှဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးငွေပေးငွေယူကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။
Hailey Lennon သည်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Anderson Kill ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်(Haley Lennon)မစ္စတာ、၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသည် -
“XRP(တိတ်ဆိတ်)တစ် ဦး အာမခံစဉ်းစားသည်、အန္တရာယ်ရှိသူကိုသင်သိပါသလား။ XRP(တိတ်ဆိတ်)အားလုံးစာရင်းဖလှယ်မှုဖြစ်ကြသည်”
XRP(တိတ်ဆိတ်)စာရင်းလဲလှယ်ရေး, အရောင်းရုံးများ ...
Ripple ၏အကြံပေးလည်းဖြစ်သောဂျိုးဇက်ဂရန်းဒတ်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ၄၀ သမ္မတအဖြစ်ရေဂင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် SEC ကော်မရှင်နာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
"မည်သို့ပင်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်、ဖြိုခွဲမှုစတင်ပါ、ဒါဟာ XRP ကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိလိမ့်မယ်။ "
အကယ်၍ SEC ကတရားစွဲဆိုဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာသိရင် "、ပွဲစားများသည်တရား ၀ င်အန္တရာယ်များကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့် XRP အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်)Is、Ripple လဲလှယ်ပေးဆောင်、ဖလှယ်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် "XRP"(တိတ်ဆိတ်)"ရောင်း ၀ ယ်နိုင်" ရန်တောင်းဆိုမှုများ
SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်)ကတင်သွင်းတရားဝင်တရားစွဲဆိုမှုအရသိရသည်、Ripple သည်အနည်းဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်း ၁၀ ခုနှင့်စာချုပ်ချုပ်ထားသည်။
“2017ယခုနှစ်နှင့် 2018 ခုနှစ်、ဂယက်ထလည်းဖြစ်、အနည်းဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်း ၁၀ ခု (SEC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ、အနည်းဆုံးနှစ်ခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အဓိကရုံးများရှိသည်)、XRP(တိတ်ဆိတ်)စာရင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးမက်လုံးများကိုပေးအပ်ရန်စာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဆိုခဲ့သည်
တိတ်ဆိတ်、ဒီပလက်ဖောင်းများအတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်、ပုံမှန်အားဖြင့် XRP(တိတ်ဆိတ်) သုံးပြီးစနစ်အပေါ် XRP(တိတ်ဆိတ်) ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းနိုင်ဖြစ်ရန်、တစ်ခါတစ်ရံကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်ကိုက်ညီရန်မက်လုံးကိုပေးသည်”
XRP(တိတ်ဆိတ်)လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်အတွင်း Binance စျေးနှုန်းသည် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်
XRP(တိတ်ဆိတ်)တရားဝင်တစ် ဦး အာမခံစဉ်းစားသည်、ရှေ့နေ Hailey Lennon(Haley Lennon)မစ္စတာ、တရားစွဲဆိုမှုတွင်ဖော်ပြထားသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှု ၁၀ ​​ခုသည်အန greatest တရာယ်အများဆုံးခံရနိုင်ကြောင်းထောက်ပြသည်
မကြာသေးမီကဂယက်ထ、2၎င်းသည်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ စုဆောင်းပြီးနောက်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည်။、Ripple နှင့် XRP တိုကင်များသည်နည်းပညာအရကွဲပြားခြားနားသည်、ဂယက်ထသည်ငွေကြေး၏စျေးကွက်တန်ဖိုး၏သိသိသာသာသောအပိုင်းကိုထိန်းသိမ်းသည်、တစ်ကြိမ်တွင် XRP လက္ခဏာသက်သေကိုယ်နှိုက်ကို "ဂယက်ထ"、ငါသည်လည်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူလိုဂို shared
သို့သော်ငြားလည်း、XRP သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်မှုများစွာတွင်စာရင်းဝင်သည်、အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှု၏အတိုင်းအတာကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်、၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးကစားသမားများအပေါ် ပို၍ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်
ဂယက်ထ CEO ဖြစ်သူ Brad Garlinghouse / ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Chris Larsen သည် "တက်ကြွစွာတိုက်ခိုက်ခြင်း"
Brad Garlinghouse, Ripple ၏စီအီးအို(သွေး Garling အိမ်)မစ္စတာ、ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်စီးပွားရေးသမားခရစ် Larsen(ခရစ် Larsen)သူက "ငါတို့အမှုကိုသက်သေပြ" ရန်သူသည်ရန်လိုစွာတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
Brad Garlinghouse(သွေး Garling အိမ်)သူလည်းဖော်ပြသည်
Brad Garlinghouse(သွေး Garling အိမ်)မစ္စတာ、SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်)တစ် ဦး ချင်းနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးရွေးချယ်မှုလည်းရှိသည်、သူတို့ကဒီလမ်းကြောင်းကိုမသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်
အဲဒီအကြောင်းကြောင့်、XRP(တိတ်ဆိတ်)တရားဝင်တစ် ဦး အာမခံရှိမရှိတရားဝင်ကောက်ချက်ချရန်、ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နောက်ဆုံးတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်
အာရှအဖွဲ့အစည်းများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြသည်။ * OTC အရောင်းအ ၀ ယ် (Over The Counter)၊ OSL၊ cryptocurrency ၏လဲလှယ်မှုသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
“Ripple Labs Inc. နှင့်၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိ ၂ ဦး သည် US Securities and Exchange Commission မှပြenforcement္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်းအတာအထိအရေးယူခံရသည်、OSL ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ $ XRP အားလုံး(တိတ်ဆိတ်)ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားပြီ”
* OTC ကုန်သွယ်မှု：virtual ငွေကြေးကို၏လဲလှယ်ဖျန်ဖြေခြင်းမရှိဘဲတ ဦး တည်း -on-one ကုန်သွယ်ရန်
အန္တရာယ်မှာ XRP(တိတ်ဆိတ်)စျေးနှုန်း "ပြုပါသို့မဟုတ်သေ" အခြေအနေ
အမြင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အနေဖြင့်、ကုန်သည်များ、XRP(တိတ်ဆိတ်)လက်ရှိအဆင့်တွင် ၀.၃၅ ဒေါ်လာ ၀ န်းကျင်ပြင်းထန်စွာထိုးဖောက်ရန်
ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာပိုပြီးဆင်းသက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့် "လုပ်ပါသို့မဟုတ်သေသည်" အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ပြောပါ
အန္တရာယ်မှာ XRP(တိတ်ဆိတ်)စျေးနှင့် XRP(တိတ်ဆိတ်)ဇယား
သို့သော်、သင်တစ် ဦး palliative စုဝေးငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး
၎င်းသည် "ဆောင်းရာသီတွင်ကောက်ရိုး ဦး ထုပ်တစ်ခုဝယ်" ဟူသောစျေးကွက်ထားသောစကားစုမဟုတ်ပါ။、ငါ XRP (ဂယက်ထသည့်) ကုန်သည်များသည် ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသောသူများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
XRP (ဂယက်ထခြင်း) သည် "အသက်ရှင်ခြင်းသို့မဟုတ်သေခြင်း" ကဲ့သို့သောအရာဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် cryptocurrency ၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။
Bitcoin လွှမ်းမိုးမှုသည် XRP ကျဆင်းမှုအတွင်းတစ်နှစ်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ခဲ့သည်
Bitcoin လွှမ်းမိုးမှုသည် XRP ကျဆင်းမှုအတွင်းတစ်နှစ်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ခဲ့သည်、Virtual ငွေကြေး Bitcoin ၏သာလွန်ကောင်းမွန်မှုသည်တိုးပွားလျက်ရှိသည်
စကားမစပ်, virtual ငွေကြေး (cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှု) Bitcoin (BTC)、23တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၂၂၈၀၀ အထိကျဆင်းသွားသည်、24,000ဒေါ်လာခုခံဆီသို့ ဦး တည်မိုးသည်းထန်စွာမြန်နှုန်းမှာမြင့်တက်
US Tesla Bitcoin(BTC)ငွေပေးချေမှု၊ EV ငွေပေးချေမှုကို Mr. Elon Musk ကဆိုင်းငံ့လိုက်သည်(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)"သတ္တုတူးဖော်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှု"
2021မေ ၁၂、အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တက်စလာ, Inc、Crypto ပိုင်ဆိုင်မှု (virtual ငွေကြေး) ဖြစ်သော Bitcoin ကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ (EV) ကိုဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။。
US Tesla Bitcoin / BTC ငွေပေးချေမှု၊ EV ငွေပေးချေမှုကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်
Elon Musk(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)"သတ္တုတူးဖော်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှု"
အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.) CEO ဖြစ်သူ Elon Musk、2020ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၄ တွင်တင်ထားသောတွစ်တာတွင်ဖော်ပြထားသည်။。ကြောင်း post မှာ、"Cryptocurrencies ကောင်းတစ်စိတ်ကူးရှိပါတယ်、ငါကနည်းလမ်းများစွာနှင့်အနာဂတ်၌အလားအလာရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။、ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်လေးလံသောဝန်ကိုမထမ်းနိုင်ပါ။ "。
တက်စလာ, Inc အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk "အမေရိကန်နိုင်ငံ Tesla, Inc. မှ ၀ ယ်ယူပြီးပိုင်ဆိုင်သည့် Bitcoin များကိုရောင်းချရန်အစီအစဉ်မရှိပါ။ "
2021ဖေဖော်ဝါရီလ、အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.)Bitcoin / BTC (ဒေါ်လာ ၁၆၀ ဘီလီယံခန့်) တန်ဖိုးရှိဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ၀ ယ်ယူလိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်、2021မတ်လအကုန်ပိုင်းတွင် US ရှိ EV ကဲ့သို့ Bitcoin / BTC ဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။。
တက်စလာသည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအားဖြင့်ရေနံမှီခိုမှုကိုရှောင်ရှားရန်ရည်ရွယ်သည်、ငွေပေးချေရန်အတွက်ကြီးမားသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ပိမှုရှိသော Bitcoin / BTC ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်း、အချို့အား ESG (ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု) လမ်းကြောင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုဝေဖန်ခံနေရသည်。
အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.) Elon Musk(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)"အမေရိကန်နိုင်ငံ Tesla, Inc. မှဝယ်ယူပြီးပိုင်ဆိုင်သည့် Bitcoin / BTC ကိုရောင်းချရန်အစီအစဉ်မရှိပါဘူး" နှင့်သတ္တုတူးဖော်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ပိုမို၍ ရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းအင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။、ငါတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ "。
Elon Musk (တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Tesla မှ ၀ ယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသော Bitcoin / BTC ကိုရောင်းချရန်အစီအစဉ်မရှိပါ။ "
အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.)ယင်း၏ Bitcoin / BTC ရောင်းချဘယ်တော့မှမ、သတ္တုတူးဖော်ရေးပိုမိုရေရှည်တည်တံ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်သို့ပြောင်းလျှင်、Bitcoin / BTC နှင့်ကုန်သွယ်မှုပြန်လည်စတင်ရန်အကြံပြုသည်。ဒါ့အပြင်、Bitcoin / BTC ထက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသောအခြား virtual ငွေကြေးများနှင့်လည်းငွေပေးချေရန်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနေပါသည်。
အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.)ယခုအချိန်အထိရောင်းချခဲ့သော $ 1.5 ဘီလီယံ Bitcoin / BTC ၏、မင်းငွေဘယ်လောက်ရောင်းခဲ့လဲ、ဒါ့အပြင်、လူသိများသတ္တုတွင်းစွမ်းအင်ပြissuesနာများရှိနေသော်လည်း、သင် Bitcoin / BTC ကိုအဘယ်ကြောင့်ဝယ်ခဲ့သည်ကိုမရှင်းလင်းပါ。
သတ္တုတူးဖော်ရေးသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့်အတူပြီးစီးသောအခါ、အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.)Bitcoin / BTC ကုန်သွယ်မှုပြန်လည်စတင်မည်လား။
Bitcoin / BTC သတ္တုတူးဖော်ရေး၌တည်၏、ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပျမ်းမျှ ၇.၄၆ GW သုံးစွဲခဲ့သည်、ယခုနှစ်တွင်စစ်တမ်းတစ်ခုတည်း၌ ၁၆.၇၁GW ဖြစ်သည်。
Bitcoin ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် Elon Musk မှပုံမှန်မဟုတ်သောအရာဖြစ်သည်(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)သို့သော်သတ္တုတူးဖော်ရေးကိုသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ဖြင့်ပြုလုပ်လျှင်、အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.)Bitcoin ကုန်သွယ်မှုပြန်လည်စတင်မည်လော
အနာဂတ်အမေရိကန်တက်စလာ(တက်စလာ, Inc.)မစ္စတာ Elon Musk ၏လမ်းကြောင်းသစ်ကိုအာရုံစိုက်နေစဉ်(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)Is、သင်သည်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းသော cryptocurrencies သို့ပြောင်းပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်。
Elon Musk(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)အကြိုက်ဆုံးကို virtual ငွေကြေး dogecoin(ခွေး)Tesla ကားများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သောအနာဂတ်လား။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က、Elon Musk(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)တွစ်တာတွင်နောက်လိုက်ပါ、Bitcoin / BTC သက်သက်မဟုတ်ပါ、မကြာသေးမီကအကြိုက်ဆုံး cryptocurrency：ခွေးရူး(ခွေး)ဒါပေမယ့်ငါ Tesla ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့အဲဒါကိုသုံးသင့်မသင့်လားလို့မေးခဲ့တယ်、နှလုံးရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှု、အခြားသူများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကလွှမ်းမိုးနိုင်သည်。
Elon Musk Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်(BTC)ဆိုင်းငံ့ငွေပေးချေမှုနှင့် EV ပေးချေမှု "သတ္တုတူးဖော်ရေးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ခြင်း"。နှလုံးသားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှု、သူ့ဝန်းကျင်ရှိသူများ၏ထင်မြင်ချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်。
သူ、Bitcoin / BTC အရောင်းအဝယ်ကိုခေတ္တခဏဆိုင်းငံ့ထားလိမ့်မည်、"ကျနော်တို့ကငွေပေးငွေယူတစ်ခုတည်းမှာ Bitcoin / BTC စွမ်းအင်ရဲ့ ၁% အောက်ကိုစားသုံးတဲ့နောက်ထပ် cryptocurrency ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနေပါတယ်။ "。
Elon Musk(စီအီးအို)အကြိုက်ဆုံးကို virtual ငွေကြေး：ခွေးရူး(ခွေး)PoW ကိုလက်ခံသည်
Elon Musk (တက်စလာ, Inc. စီအီးအို) "ကျနော်တို့ကငွေပေးငွေယူတစ်ခုတည်းမှာ Bitcoin / BTC စွမ်းအင်ရဲ့ ၁% အောက်ကိုစားသုံးတဲ့နောက်ထပ် cryptocurrency ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနေပါတယ်။ "
သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်စွမ်းအင်မြင့်မားစွာသုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့် PoW-based cryptocurrency (Bitcoin / BTC သည်ဤအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သည်)、၎င်းသည် PoS (Proof-of-Stake) အခြေပြု cryptocurrency ဖြစ်နိုင်သည်。
စကားမစပ်、Elon Musk(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)အနှစ်သက်ဆုံး virtual ငွေကြေး "Dogecoin"(ခွေး)」PoS (Proof-of-Stake) ကိုအခြေခံသည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည် PoW ကိုအသုံးပြုသည်။Elon Musk မှအကြံပြုသော cryptocurrency：ခွေးရူး(ခွေး) Tesla ကားများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သောအနာဂတ်လား။ ထို့အပြင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်၌တည်ရှိ၏ခွေးရူး(ခွေး)၎င်းသည်စျေးနှုန်းနှင့်တန်ဖိုးကိုမျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်အခြေအနေဖြစ်သည်。
Elon Musk(စီအီးအို)Cryptocurrency ဈေးကွက်သည် "Elon Musk" နှင့်အတက်အကျရှိသည်။!! 2021ယခုနှစ်အပြင်းထန်ဆုံးအခြေခံအကျဆုံးအဆိုပါ cryptocurrency စျေးကွက်အတွက်သြဇာအရှိဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ခြင်း၏အဖြစ်မှန်
virtual ငွေကြေးနောက်လိုက်တစ် ဦး အဖြစ်မှတ်ယူခံရသူ Elon Musk(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)မူဝါဒပြောင်းလဲမှု、ဒါဟာ Bitcoin / BTC စျေးကွက်ကိုထိခိုက်ဖွယ်ရှိသည်。
သတင်းအချက်အလက် site ၏အဆိုအရ "CoinDesk"、2021ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ နေ့လည်ခင်းတွင်ဒေါ်လာ ၅၄၀၀၀ အကွာအဝေးရှိသည့် Bitcoin / BTC ၏စျေးနှုန်း၊、Elon Musk(စီအီးအို)တွစ်တာတွင်တင်ပြီးနောက်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်、ယာယီ $ 50,000 အဆင့်ကိုအောက်တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်。Elon Musk(စီအီးအို)ဒါကြောင့်ဆက်နွယ်နေသည်ဖြစ်စေမ、Bitcoin / BTC စျေးနှုန်းများသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်。
Elon Musk(စီအီးအို)Cryptocurrency ဈေးကွက်သည် "Elon Musk" နှင့်အတက်အကျရှိသည်။!!
ဤသည် Elon Musk(စီအီးအို)Elon Musk အမြောက်များမှတ်ချက်က virtual ငွေကြေးစျေးကွက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်အတက်အကျဖြစ်စေသည်။
2021ယခုနှစ်၏အခိုင်မာဆုံးအခြေခံများ "Tesla, Inc. , USA"(တက်စလာ, Inc.)Elon Musk "
2021ယခုနှစ် Tesla, Inc ၏ cryptocurrency စျေးကွက်အတွက်သြဇာအရှိဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု(တက်စလာ, Inc.)Elon Musk "
crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဈေးကွက်တွင်သြဇာအညောင်းဆုံးဖြစ်သော Mr. Elon Musk(တက်စလာ, Inc. စီအီးအို)လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မှတ်ချက်များကိုစျေးကွက်မောင်းနှင်သူအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား "Elon Musk သေနတ်" အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းသည် virtual ငွေကြေးနှင့်စတော့ဈေးကွက်တွင်အခြေခံကျသောအခြေခံကျသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပြုသောအမှုမှန်သည်。
သငျသညျ Bitcoin စျေးကွက်စိတ်ပညာ၏အတိုင်းအတာဖြစ်ကြသည်
Bitcoin(BTC)စျေးကွက်၏အပူလွန်ကဲမှုခံစားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်သိပါသလား။
Crypto Fear and Greed Index ထိတ်လန့် & Desire အညွှန်းကိန်း(အညွှန်းကိန်း)လောဘကြောက်ရွံ့သံသရာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒ၏သံသရာ
Crypto Fear and Greed Index = ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာညွှန်းကိန်း(အညွှန်းကိန်း)
လောဘကြောက်ရွံ့မှုသံသရာ = ကြောက်စိတ်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏သံသရာ
RSI သည် overbought / overold ကိုဆုံးဖြတ်သည့်ပုံမှန် oscillator-based index များအတွက်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်
Bitcoin(BTC)လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေကဘာလဲ။ အနာဂတ်မှာဘယ်စျေးနှုန်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုသင် ဦး တည်နေသလဲ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်。
2021ဇူလိုင်လ 14, 2014, Bitcoin အဖြစ်(BTC)မကြုံစဖူး "oversold" အဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်。
Bitcoin(BTC) ဒါဟာမကြုံစဖူး "overold" အဆင့်သို့ဝင်နှင့်တာရှည်အကွာအဝေးစျေးကွက်ဆက်လက်。များစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား、Bitcoin အလွန်အကျွံရောင်းချသည်、အချို့ကရောင်းချခြင်းသည်နောက်ထပ်ရောင်းချခြင်းနှင့်သိသိသာသာစျေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းသို့ ဦး တည်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။。
Bitcoin(BTC)နည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာသုံးသပ်သူများက ၂၀၂၁ မေလလယ်တွင်ဈေးကျမည်ဟုခန့်မှန်းကြသည် : ကေတီ Stockton(ကေတီ Stockton)ဒါပေမယ့်、လက်ရှိ Bitcoin(BTC)အဆိုပါအကွာအဝေးစျေးကွက်အထက်သို့ချိုးကျဖွယ်ရှိသည်。
Bitcoin(BTC)နည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာသုံးသပ်သူများ : ကေတီ Stockton(ကေတီ Stockton)
"လက်ရှိ Bitcoin(BTC)Range ကိုးကားအပေါ်သို့ချိုးဖဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ "
နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်အခွင့်အလမ်း,သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီရန် "Fairlead Strategies"(Fairlead မဟာဗျူဟာများ, LLC)Katie Stockton, တည်ထောင်သူနှင့် Managing Partner(ကေတီ Stockton)Is、2021မေလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၄ တွင်ထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာတွင်、"သူကပြားချပ်ချပ်အဆင့်သူ့ဟာသူကြားနေပေမယ့်、ငါထင်တာကအဆင့်နိမ့်အဆင့်ထက်စာရင်တက်နေတယ်။。
MACD မှတ်တမ်းကိုကြည့်ခြင်း、"နှစ်လယ်ပိုင်းအရှိန်အဟုန်တိုးတက်လာနေသည်" ဟုကေတီ Stockton ကဆိုသည်။(ကေတီ Stockton)မစ္စတာက。
Bitcoin(BTC)မေလနှောင်းပိုင်းမှ စ၍ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အထိရှိခဲ့သည်、ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပတ်အတွင်းတွင်အကွာအဝေးကိုပိုမိုကျဉ်းမြောင်းစေခဲ့သည်။ သို့သော်ကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုများလည်းရှိသေးသည်။ စျေးကွက်သည်အီကွေရှင်းသို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။。
ကေတီ Stockton(ကေတီ Stockton)"ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ အောက်မကျဘူး" ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုပြတယ်။
ရင်းမြစ်：Fairlead မဟာဗျူဟာများ, TradingView
အပတ်စဉ်ဇယား၏ MACD မှတ်တမ်း (လမ်းကြောင်းအင်အားနှင့်အပြောင်းအလဲကိုညွှန်ပြသည့်အရာ) ဖြစ်သည်、2021ဇွန်လလယ်ပိုင်းတွင်ထွက်အောက်ခြေ、ထရန်လှည့်。
ကေတီ Stockton(ကေတီ Stockton)"Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်(BTC)အလယ်အလတ်ကာလအတွင်း oversold ဖြစ်ပါတယ်、၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၃၀,၀၀၀ ကျော်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်(အကွာအဝေး)ထုတ်လုပ်နေသည်、Bitcoin(BTC)အဲဒါကငါတို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ "。
ကေတီ Stockton(ကေတီ Stockton)、ညှိနှိုင်းထားသော Universal Time (UTC) တွင်ရက်ပေါင်း ၅၀ ရွေ့လျားပျမ်းမျှ (MA) ၏ဒေါ်လာ ၃၅,၅၀၀ အထက်ဆက်တိုက်။、အပြင်ဘက် breakout အတည်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်。အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်、၎င်းသည်နောက်ထပ်ခုခံရေးလမ်းကြောင်းသို့ဒေါ်လာ ၄၄၀၀၀ ဝန်းကျင်ကိုဖွင့်သည်။。
ရှည်လျားသောသံနံရံတွင်အထောက်အပံ့အဖြစ်ကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားသောဒေါ်လာ ၃၀,၀၀၀ အောက်တွင်、ထို့အပြင်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဇယားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။、ကေတီ Stockton(ကေတီ Stockton)"ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ အောက်မကျဘူး" ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုပြတယ်။。
ညှိုးနွမ်းပျက်စီးနေသောစျေးကွက်နွေရာသီတင်သွင်းခြင်း! ?? "Bitcoin(BTC)တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်ကုန်သည်、ကုန်သည်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ဗီလာရှိသူများအတွက်! "
နွေရာသီသည်မြောက်ဘက်ခြမ်း၌လာသည်、ဤသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်အရှိန်အဟုန်ဆုံးရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်。
နွေရာသီတွင်ဘဏ္transactionsာရေးအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ပါ ၀ င်သူအရေအတွက်လျော့ကျသွားပြီး၊ နွေရာသီညှိုးနွမ်းပျက်စီးနေသောစျေးကွက်ဟုခေါ်သည့်စျေးကွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ရပ်သည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။。
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများသည်နွေရာသီအားလပ်ရက်တွင်ရောက်ရှိနေကြသည်(နွေရာသီအားလပ်ရက်)သင်ဝင်တဲ့အခါ、ဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးလာခြင်း၊ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များမှအရောင်းအ ၀ ယ်များကျဆင်းလာခြင်း၊。
Bitcoin(BTC)တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်ကုန်သည်、ကုန်သည်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ဗီလာရှိသူများအတွက်!
ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏အခြေခံဖြစ်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ပုံစံများကိုတည်ဆောက်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ、Blockchain နှင့် On-chain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော "Glass node"(Glassnode)Is、Bitcoin စျေးကွက်ကို "တိတ်ဆိတ်စွာ" ဟုဖော်ပြခဲ့သည်。
Bitcoin(BTC)ကုန်သွယ်မှုပမာဏကျဆင်းနေသည်、ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ "EQONEX"、မကြာသေးမီက、ငါအကြောင်းပြချက်၏အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအာကာသသို့ဝင်သောသူအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနွေရာသီအားလပ်ရက်ယူပြီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။。
ဇူလိုင် ၁၂ ရက်စွဲပါသတင်းလွှာတွင် "EQONEX"、၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တို့တွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည့်နှစ်များဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။。ဒါပေမယ့် "ကျနော်တို့တ ဦး တည်းပြောဖို့မေ့လျော့。အဓိကဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်အလုပ်လုပ်သူ、ငါနွေရာသီအားလပ်ရက်အပန်းဖြေခြင်းကိုနှစ်သက်တယ် "ဟုသူကနွေရာသီညှိုးနွမ်းပျက်စီးနေသောဈေးကွက်ကိုသတိပြုမိသည်။。
"Bitcoin(BTC)တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်ကုန်သည်、ကုန်သည်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ဗီလာရှိသူများအတွက်! "
Bitcoin(BTC)၏တရားသဖြင့်စီရင်အညွှန်းကိန်းကဘာလဲ? ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘုရား Warren ဘတ်ဖတ်)သူ၏တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်နည်းလမ်း“ သင်တက်လျှင်လောဘနှင့်ရောင်းပါ”“ သင်ဆင်းသွားလျှင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်ပါ”“ ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့် ၀ ယ်ပါ၊ လောဘနှင့်ရောင်းပါ” မြင့်မားသောအမြတ်နှုန်းရေတိုကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းကိုလေ့ကျင့်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့သန်းကြွယ်သူဌေး Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)မိမိအကိုးကားတစ်ခုမှာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘုရား Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)သူ၏တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်နည်းလမ်းမှာ -“ လောဘကြီးခြင်းဖြင့်ရောင်းပါ”“ လောဘကြီးခြင်းဖြင့်ရောင်းဝယ်ပါ။ လောဘကြီးခြင်းဖြင့်ရောင်းပါ” ပြိုလဲသွားပါက“ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်ဝယ်ပါ” သည်လူ့ကျင့် ၀ တ်ကို အခြေခံ၍ အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အချိန်ရောက်ပြီ။。
Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်“ အခြားသူများလောဘကြီးလာလျှင်ကြောက်ခြင်း” ဖြစ်သည်、သူတစ်ပါးကိုကြောက်သောအခါလောဘကြီးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။、ဒီယုံကြည်ချက်ကိုအခြေခံပြီးပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းများကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။。
သို့သော်、ငါဒီစကားလုံးကိုမကြာခဏကြားရ、လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး。ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားအပေါ်、ဒုတိယ Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)မပေါ်လာသေးပါ。
Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အနှစ်သာရကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းကြည့်ပါလျှင်、Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)လူ့ပြုမူပုံကိုမည်သူမျှနားမလည်ဟုပြောနိုင်သည်。
Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)Is、လူတွေစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံရတဲ့အခါအဓိပ်ပါယျမရှိဘူးဆိုတာအပြည့်အဝနားလည်ပါ、ဒါကနားလည်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကောင်းသောအသုံးပြုမှုထားလျက်ရှိသည်။。သူ့ကိုသူ့တိုတောင်းသောကာလကုန်သွယ်မှု၌သူ၏နည်းလမ်းကိုမျိုးပွားရန်ခွင့်ပြုသည်。
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘုရား Warren ဘတ်ဖတ်)မစ္စတာရေတိုကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်း
"မင်းတက်သွားရင်လောဘနဲ့ရောင်း" "သင်ဆင်းသွားလျှင်ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့်ဝယ်" "ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့်ဝယ်။ လောဘနှင့်ရောင်း"
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘုရား Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်) ၏သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်ချက်ဘာတွေလဲ?
③ Desire သည်အားသာချက်တစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးပေးသည်。
lost ဆုံးရှုံးသွားသောအခွင့်အလမ်းကိုကြောက်ခြင်း (အမြတ်အစွန်းဆုံးရှုံးမှု)、ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သို့ built တစ် ဦး သည်ခိုင်ခံ့သောစိတ်ခံစားမှုပါပဲ။、ဤသည်မှာဝယ်သူအတွက်အစွန်းဖြစ်သည်。
ကမ္ဘာ့သန်းကြွယ်သူဌေး Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)မစ္စတာ、ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မြင့်တက်သောအခါဝယ်ပါ、လောဘကြီးသည့်အခါအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာရောင်းခြင်းဖြစ်သည်、ကြီးမားသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ဥပမာများဖြင့်စစ်ဆေးခံရသူ။。
Warren ဘတ်ဖတ်(Warren အက်ဒွပ်ဘတ်ဖတ်)မစ္စတာမှုတ်သွင်း、Bitcoin(BTC)ကုန်သွယ်မှု၌ပင်လူတို့၏အပြုအမူကို အခြေခံ၍“ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်ခြင်း” ဖြစ်သည်、ကျွန်ုပ်တို့သည် "လောဘဖြင့်ရောင်းဝယ်ခြင်း" ၏တိုတောင်းသောကာလတိုကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းကိုတည်ထောင်ရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးကိုရင်ဆိုင်နေသည်။。
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘုရား Warren ဘတ်ဖတ်)သူ၏တိုတောင်းသောကာလကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်း "သင်တက်လျှင်လောဘနှင့်ရောင်းပါ" "သင်ဆင်းသွားလျှင်ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့်ဝယ်ပါ" "ကြောက်စိတ်ဖြင့် ၀ ယ်ပါ၊ လောဘဖြင့်ရောင်း" မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့်ရေတိုကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်း။ cryptocurrency ကုန်သွယ်အတွက်မဟာဗျူဟာကျင့်သုံးပါ。
Bitcoin(BTC) ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြုံစဖူး "overold" အဆင့်သို့ ၀ င်ရောက်နေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မြင့်တက်နေသည့်ပြတ်တောက်မှုနှင့်အဆုံးသတ်သွားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိလား။ ထို့အပြင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြောင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်ကြောင့်ပြိုလဲခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ခြင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။。
Bitcoin(BTC)ကြီးမားသောဝေလငါးကြီးများသည်ငွေအမြောက်အမြားဖြင့် ၀ ယ်ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုအမှာစာအများဆုံးပေးကြသည်။
Bitcoin(BTC)တက်ဝယ်ဖို့ Big ဝေလငါး
အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားဖြင့်အမိန့်ကျော် $ 100,000 ကျော်စံချိန်တင်မြင့်တက်
Bitcoin(BTC)၀ ယ်လိုအားကဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ အထိရောက်ရင်တောင်မှ ၀ ယ်လိုအားကနည်းနေသေးတယ်、အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ(ဝေလငါး)ဝယ်လက်သေးငယ်တဲ့ဝယ်လက်ထက်သာလွန်、Bullish move "အီလက်ထရောနစ်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနွားစျေးကွက်" ၏နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း。
* အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ = Bitcoin ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ(BTC)Cryptocurrency ကိုင်ဆောင်သူများသို့မဟုတ်ဝယ်ယူသူများ (အများအားဖြင့်ဝေလငါးများဟုလူသိများ)
Bitcoin(BTC)ဝေလငါးများ (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) နှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ、မကြာသေးမီက BTC ဈေးနှုန်းများကျဆင်းခြင်းကိုအများဆုံးပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူမှုကြီးမားခြင်း、ဒေတာကနေအကြံပြုခဲ့သည်。
Forex ကုန်သည်များအတွက်အဆင့်မြင့် algorithmic ကုန်သွယ်မှုညွှန်းကိန်းများနှင့်ကိရိယာများကိုတည်ဆောက်ရန် "ပစ္စည်းအညွှန်းကိန်း"(ပစ္စည်းအညွှန်းကိန်း)Is、2021မတ်လ 9, 2014 ရက်တွင် update ကိုအတူ、Binance, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်(Binance)ဒီတော့、$100,000အထက်ဖော်ပြပါ ၀ ယ်ယူမှုများသည်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ကြောင်းငါထောက်ပြသည်。
10“ By the Dip” သည် Bitcoin ဝေလငါးများ (အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) ၏အကြီးစားအကြီးစားဝယ်ယူမှုအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ကျော်သည်အမှာစာစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်
$100,000အောက်ပါအမိန့်မှမတူဘဲ、Bitcoin(BTC)အကြီးစားဝယ်အမိန့်သမိုင်း၌အရင်ကထက်ပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ကြသည်。ဤသည် * သို့ကျဆင်းလာကိုဝယ်သည် (သို့ကျဆင်းလာခြင်းအားဖြင့်) ဖြစ်နိုင်သောအရပ်ရှည်ရှည်!
the ကျဆင်းလာဝယ်ပါ (သို့ကျဆင်းလာခြင်းအားဖြင့်)：စျေးကွက်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားသောအခါ (သို့) အပေးအယူ ၀ ယ်ခြင်းများပြုလုပ်သောအချိန်တွင်အားလုံးသော ၀ ယ်ယူသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်
2021ယခုနှစ်တွင်စာရေးတံများခွဲဝေချထားမှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။、မကြာသေးမီကအီရန်လှုပ်ရှားမှုမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်、လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဝေလငါးများ (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) အနေဖြင့်လဲလှယ်ငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုခိုးယူသည်。
BTC / USD နှင့် Order Volume ရင်းမြစ်ဇယားကွက်: ပစ္စည်းအညွှန်းကိန်း / တွစ်တာ
"$ 100,000 မှ $ 1 သန်း($100။ – $1M)အတန်းထဲတွင်နယူးစံချိန်တင်မြင့်တက်(ATH)ငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်
ကုန်သွယ်ညွှန်းကိန်းများနှင့် tools များဖွံ့ဖြိုးကြောင်းပစ္စည်းညွှန်ပြချက်(ပစ္စည်းအညွှန်းကိန်း)ဒါပေမယ့်、ဇယားဖြင့် Twitter ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးပါ。
ဒါက、သူတို့ဟာကျဆုံးတဲ့ဝေလငါးများ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြီးများ) ကိုဝယ်ယူနေကြသည်။ "
ပစ္စည်းညွှန်ပြချက်(ပစ္စည်းအညွှန်းကိန်း)Is、ဒီအပတ်ရဲ့စျေးနှုန်းတွေအကြောင်း、ဝေလငါးများ (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) ကဤမြင့်တက်မှုကိုရောင်းသည်、သူကဒေါ်လာ ၅၈၀၀၀ အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲ ၂၅% ညှိနှိုင်းမှုကိုထပ်မံပြုလုပ်မည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။。
“ဝေလငါးများ (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) သည်ဈေးကြီးစွာဝယ်ယူကြသည် “Bitcoin နှင့်အတူ(BTC)သိုလှောင်ခြင်း
US $ 1.9 ထရီလီယံ, နည်းပညာစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏ကံကြမ္မာကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီအဖြစ်($1.9 ထရီလီယံ)အကြီးစားလှုံ့ဆော်မှုအထုပ်အထက်လွှတ်တော်လွန်သောအချက်ကို, etc、ဘဏ္ာရေးသုံးသပ်သူများ Bitcoin ဖြစ်ကြသည်(BTC)၎င်းသည်စျေးကွက် ၀ ယ်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်သော်လည်းမက်ခရိုစီးပွားရေးအချက်များကစျေးကွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံမပေါ်ပါ။。ဒီသတင်းကိုတုန့်ပြန်、ဝေလငါးများ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြီးများ) အတွက်အမှာစာများမှာငြင်းဆန်လျက်ရှိသည်、တရုတ်၏နည်းပညာစတော့များကိုထောက်ပံ့မှုသည်တန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်。
Binance, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်သောအဓိကကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း(Binance)$ 100,000 မှ $ 1 သန်းအမှာစာ、ဒါဟာအစဉ်အဆက်အမြင့်ဆုံးစျေးကိုဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ပေမယ့်、ဒါ “ဝေလငါးများ (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) သည်ဈေးကြီးစွာဝယ်ယူကြသည် “Bitcoin နှင့်အတူ(BTC)သင်တက်ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်。
Bitcoin(BTC)အဆိုပါ $ 54.500 မြင့်တက်、Cryptocurrency အဓိကလဲလှယ် "Coinbase(Coinbase)အကြီးစားဝယ်အမှာခန့် 12000 BTC(အကြောင်း $ 600 သန်း)၎င်းသည်ငွေအမြောက်အများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်လား။ ??
သို့သော်ငြားလည်း、လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာအဓိက Bitcoins(BTC)ဆက်လက်ခွဲဝေ၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်、Cryptocurrency အဓိကလဲလှယ်ခြင်း "Coinbase Pro"(Coinbase Pro ကို)အကြောင်းကို 12,000 BTC မှ(အကြောင်း $ 600 သန်း)ငွေအမြောက်အများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်。
နောက်ထပ် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ CryptoQuant(ကွမ်းခြံကုန်း)၏ဒေတာအရသိရသည်、Cryptocurrency Exchange (Coinbase Pro)(Coinbase Pro ကို)12,000 BTC သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်、အကြောင်းကို $ 600 သန်းတန်ဖိုးရှိ Bitcoin(BTC)ငါလှုပ်ပြီသိတယ်。
ဒါ、1အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ထက်ပိုသောရေရှည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံသို့ဆုတ်ခွာနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။。ဒါ、ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကစျေးနှုန်းကျဆင်းမှု၏အားသာချက်ကိုယူ、လျှော့စျေးနှုန်းမှာ Bitcoin(BTC)သင်စုဆောင်းထားကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ပါစေ。
အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Rex Moskovski သည်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကိုအခြေခံသည့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းပုံစံများကိုတည်ဆောက်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်(Lex Moskovski)Is、Blockchain နှင့် On-chain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော "Glass node"(Glassnode)၎င်းသည်မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းမတက်မီလေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်တကယ့်ကိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။。
Quants လေ့လာဆန်းစစ် Rex Moskovski(Lex Moskovski)
BTC / USD နှင့် Coinbase စီးထွက်ဇယား. ရင်းမြစ်: Glassnode / တွစ်တာ
BTC / USD ၏ Coinbase Fund Transfer Chart ရင်းမြစ် : Glassnode / တွစ်တာ
နှစ်ပတ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့တွင် BTC / USD သည်အမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ ၅၄,၅၀၀ ရရှိခဲ့သည်。
လဲလှယ်သောကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေ (ETFs) အတွက်ကျော်ကြားသောဆန်ကို arc·ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု·စီမံခန့်ခွဲမှု(ARK ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှု)Cathie Wood ၏တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်(Cathie Wood က)Is、ယခုအပတ်၏ CNBC ဆန့်ကျင်、"ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ、Bitcoin(BTC)ငါဒါကငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်လိုပြုမူလိမ့်မယ်ထင်တယ် "。
Binance(Binance)၏အမိန့်စာအုပ်အရသိရသည်、BTC / USDT ၏နောက်ထပ်အဓိကခုခံမှုသည်、ပတ်ပတ်လည် $ 58,000 နှင့် $ 59.500 ၏စံချိန်တင်မြင့်တက်。
Coinbase Pro ကို(Coinbase Pro ကို)ကနေ Bitcoin(BTC)လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ငွေလွှဲခြင်းတို့သည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကဲ့သို့ဝေလငါးများ (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) ကို ၀ ယ်ရန်အကြံပြုနိုင်သည်
Cryptocurrency လဲလှယ် "Blocktain(ကွမ်းခြံကုန်း)CEO ဖြစ်သူ John Willock(John Willock)အဆိုအရ、Cryptocurrency အဓိကလဲလှယ်ခြင်း "Coinbase Pro"(Coinbase Pro ကို)ကြိုက်သည်、Bitcoin ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသုံးပြုလိုသောအနည်းငယ်သောပလက်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။。
ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဖြစ်ဝေလငါး (ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) ကိုဝယ်ယူရန်အကြံပြုဖွယ်ရှိသည်
Cryptocurrency ချိန်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု Tane(ကွမ်းခြံကုန်း)CEO ဖြစ်သူ John Willock(John Willock)Is、"Coinbase Pro ကို(Coinbase Pro ကို)Is、လဲလှယ်、ငွေထုတ်ချေးပေးသူ、အခြားမိတ်ဖက်များ၏ကွန်ယက်မှတဆင့်、တရား ၀ င်ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်ကိုအပြည့်အ ၀ လေ့လာနိုင်မည့်ပါတီများကငွေချေးယူသည့်ငွေဒင်္ဂါးများကိုသာကျွန်ုပ်တို့တို့ထိသည်။。
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ(ဝေလငါး)Is、ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာယေဘုယျစျေးကွက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းရှိပါတယ်、ရရှိနိုင်သော Bitcoins(BTC)လျော့နေသည်。ရလဒ်အနေဖြင့်、ဤကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းသည်စင်ကြယ်သောလဲလှယ်ခြင်းနှင့် cryptocurrency ဖြစ်သည်(virtual ငွေကြေးကို)ဝယ်ရန်အတင်းအကျပ်、ဒါဟာအလုံးစုံစျေးနှုန်းကိုတက်တွန်းပါလိမ့်မယ်။ "。
Cryptocurrency ချိန်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု Tane(ကွမ်းခြံကုန်း) CEO ဖြစ်သူ John Willock(John Willock)
"Coinbase Pro ကို(Coinbase Pro ကို)တူပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရရှိနိုင် Bitcoin、လတ်တလော hacks များ、ခိုးမှု、Ransomware、မမှောင်မိုက်သောစျေးကွက်ဝင်ငွေ”သန့်ရှင်း”ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
Coinbase Pro ကို(Coinbase Pro ကို)ကနေ Bitcoin(BTC)အပြောင်းအလဲများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ငွေလွှဲခြင်းတို့သည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကဲ့သို့ဝေလငါးများ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြီးများ) ကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုညွှန်ပြနိုင်ကြောင်းလေ့လာဆန်းစစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။。
မှတ်ချက်ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာတော့သူက“ ဘဏ်မှာပြေးနေရင်ပုံမှန်ဘဏ်လိုဒေ ၀ ါလီခံရလိမ့်မယ်” ဟုရှင်းပြသည်။
(Iron Finance ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ)
1တစ်ရက်လျှင် ၁.၂.၂ ဘီလီယံသို့ကျဆင်းသွားသောသမိုင်းကြောင်းအရပျက်ကျမှု Virtual ငွေကြေး "TITAN" သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှု "IRON" ၏တန်ဖိုးကိုအာမခံရန်အတွက်လက္ခဏာသက်သေတစ်ခုဖြစ်သည်။ virtual ငွေကြေး“ Iron Titanium (TITAN)” သည်တစ်နေ့လျှင် ၄.၂ ဘီလီယံဖြစ်သည်။ သုံးပုံတစ်ပုံသို့ကျဆင်းသွားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသင်္ချာဒဏ္myာရီသည်ပြိုလဲလုနီးပြီဖြစ်သည်
အံ့မခန်း Cryptocurrency Cryptocurrency:Iron Titanium (TITAN) သည်တစ်ရက်မပြည့်မီဒေါ်လာ ၆၀ မှ ၀ ၀ ၀ အတွင်းသို့ကျသွားသည်
ယူနိုက်တက်စတိတ်မှ Iron Finance မှထုတ်ဝေသော Cryptographic assets (virtual ငွေကြေး) "Iron Titanium (TITAN)" ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွား、တန်ဖိုးမရှိ、2021၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၆ ရက်ညနေ ၂း၀၀ ခန့်တွင်စျေးနှုန်းမြင့်မားသော 1TITAN = $ 64.19 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။。
33ဒေါ်လာစျေးတစ်ဝက် (ယန်း ၃,၆၀၀ ခန့်)。ဒါ “ထိတ်လန့်ခြင်းရောင်းအား “နောက်တံခါး、17၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင် ၄.၂ ဘီလီယံတန်ဖိုး ($ သုညနီးပါး) သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ (၀. ၀.၀၀၀၀၀၁၅၁၀၉) အထိကျဆင်းခဲ့သည် (CoinGecko အချက်အလက်များအရ)
သီအိုရီတစ်ခုအရ、TITAN ၏ပျက်ကျမှု、cryptocurrency တီထွင်သူသည်စီမံကိန်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများဖြင့်ထွက်ပြေးသွားသော“ ကော်ဇောဆွဲခြင်း” တစ်ခုဖြစ်သည်。
Iron Finance ကိုနာမည်အကြီးဆုံးနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောသန်းကြွယ်သူဌေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Mark Cuban မှထောက်ပံ့သည်။
ကြမ်းတမ်းသောဘီလျံနာ NBA ဘတ်စကက်ဘောအသင်း၏ပိုင်ရှင်မာ့ခ်ကျူးဘား (Dallas Mavericks)(မာကုကျူးဘား)Is、Cryptocurrency Iron Titanium (TITAN) သည်တစ်ရက်မပြည့်မီဒေါ်လာ ၆၀ မှ ၀ ၀ ၀ အတွင်းသို့ကျဆင်းသွားသည့်အံ့မခန်းဖွယ် crypto crash မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။。
သံဘဏ္financeာရေးတွင်အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Mark Cuban(မာကုကျူးဘား)ဒါဟာအစကျယ်ပြန့်ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်。6မတ်လ 17、Bloomberg、မာကုကျူးဘား(မာကုကျူးဘား)ဒါပေမယ့်、မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းထိုးကျပြီးနောက်、သူကအဓိကဒင်္ဂါးပြားစည်းမျဉ်းလိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြသည်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်。
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Mark Cuban(မာကုကျူးဘား)စည်းမျဉ်းများအတွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုများ
မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်တွင်မဆို、ငွေရှာရုံသာမဟုတ်、သင်ယူရန်အန္တရာယ်များကိုယူပါ。DiFi စီမံခန့်ခွဲမှု၌、အမြတ်အစွန်းကိုတွက်ချက်ရန်အရေးကြီးသည်။、ငါအရေးကြီးသောညွှန်းကိန်းတွက်ချက်ရန်လျစ်လျူရှုခဲ့သည်。ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည်、အားလုံး “ငါ “ဘယ်တော့လဲ “တီ “အမှတ်အသားပြုရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရရန်မလုံလောက်ပါ。
သို့သော်、သငျသညျသင်ခန်းစာများလိုလျှင်、တကယ့်ပြproblemနာကစည်းမျဉ်းဥပဒေပဲ。ကစားသမားအများအပြား、L1 နှင့် L2 အသစ်တို့နှင့်အတူဟောင်းနွမ်းသောဒင်္ဂါးပြားများတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်。အနိုင်ရသည်、အလွန်အကျိုးအမြတ်များသောကော်မရှင်နှင့်ခုံသမာဓိစီးပွားရေးဖြစ်လိမ့်မည်。
တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သောအပေါင်ပစ္စည်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မတူညီသောအခါ、၎င်း၏စွန့်စားမှုတွက်ချက်မှုကိုသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည်、အဲဒါကိုမဖြန့်ချီမီအတည်ပြုရန်လိုပါသလား။
တရက်ခန့်သမိုင်းဝင်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့်ပြိုကျသော cryptocurrency "TITAN" သည် $0ဖြစ်သည်
နောက်ထပ်သီအိုရီ、ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ TITAN ရဲ့စျေးကကျသွားလို့ပဲ、TITAN အပေါ်ယုံကြည်မှုအငွေ့ပျံလာသည်။。ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး က "ဝေလငါး" ဟုခေါ်သည်、ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ထိတ်လန့်စေလို့ပဲ、တစ် ဦး ကသေမင်းလိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်。
အရောင်းအမြောက်အမြား၏ရလဒ်、TITAN ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က、အားလုံးနီးပါးတန်ဖိုးရှုံးသည်、6မတ်လ ၁၆ ရက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀ ကျော်သောစျေးနှုန်းများ、နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင် US $0အထက်သို့ကျဆင်းသွားသည်。
တစ်ရက်အတွင်းသမိုင်းဝင်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကို TITAN ကဘာလဲ။、ဘယ်လိုငွေကြေးအမျိုးအစားလဲ။
Iron Titanium (TITAN) ၏မူလရည်ရွယ်ချက် = ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအတွက် virtual ငွေကြေး
1တစ်ရက်လျှင် ၁.၂.၂ ဘီလီယံသို့ကျဆင်းသွားသောသမိုင်းကြောင်းအရပျက်ကျမှု Virtual ငွေကြေး "TITAN" သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှု IRON ၏တန်ဖိုးကိုသေချာစေရန်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည်
သံ titanium(TITAN)"တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့" ​​ဟုခေါ်သော virtual ငွေကြေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။。တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့ကဘာလဲ?、ဒေါ်လာနှင့်ယူရိုကဲ့သို့သောတရားဝင်ငွေပေးငွေယူ၏တန်ဖိုးနှင့်ဆက်စပ်သောပုံသေငွေကြေး။。ပုံမှန် virtual ငွေကြေးဖြစ်သည့် Bitcoin သည်တရားဝင်ငွေပေးချေမှုနှင့်မဆက်စပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။、စျေးနှုန်းအတက်အကျ、၏သင်တန်းငွေကြေးအဖြစ်、မှန်းဆထုတ်ကုန်အဖြစ်အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်。
ဥပမာ、1Bitcoin နှုန်း $ 35,000 စျေးနှုန်းမှာကားများတင်ပို့、သင် Bitcoin နှင့်အတူအခြေချပြီးနောက်စျေးနှုန်း $ 10,000 မှကျဆင်းပါက、ကျွန်တော်စျေး၏သုံးပုံတစ်ပုံအောက်သာရနိုင်သည်。ဒီနှင့်အတူ、ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအနေဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးသုံးစွဲရန်စွန့်စားရမှုအလွန်ကြီးသည်。
encryption ငွေကြေးကို : Iron Titanium (TITAN) သည်ဘယ်သောအခါမျှမပျက်စီးရဟုပြောသော virtual ငွေကြေးဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်、ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူတစ် ဦး က virtual ငွေကြေး、အစစ်အမှန်ငွေကြေးကျဆင်းမထားဘူးသော်လည်း、42၎င်းသည်သန်းတစ်ရာ၏အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Iron Titanium (TITAN) စနစ်ကိုယ်နှိုက်မှာပြaနာရှိနေလို့ပဲ။。
(2)Cryptocurrency အပေါင်ပစ္စည်းအမျိုးအစား、Ethereum (ETH)、အခြေခံအာရုံစူးစိုက်မှုတိုကင် (BAT)、အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြွေစေ့ (USDC / USDT) နှင့်အခြားကို virtual ငွေကြေး、တရားဝင်တင်ဒါပေါင်နှံမှုထက်တည်ငြိမ်မှုနည်းသည်。
(3)လုံခြုံမှုမရှိသောအမျိုးအစားကို "algorithm တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့" ​​ဟုခေါ်သည်။、အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အခြား cryptocurrencies မှချည်နှောင်ခြင်းမ。အဲဒီအစား、တစ်ခု algorithm ကိုအသုံးပြု။ ထုတ်ပေးငွေပမာဏကိုထိန်းချုပ်ပါ、လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှကာကွယ်ပေးသည်。တည်ငြိမ်မှု၏နိမ့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရ、3တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားအမျိုးအစားများအနည်းဆုံးလူကြိုက်များ。
Iron Titanium (TITAN) သည်လုံခြုံမှုမရှိသောတည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့တစ်ခုဖြစ်သည်。အဆိုပါလူကြိုက် algorithm ကိုတည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့、မြင့်တက်စျေးနှုန်းများကိုပထမ ဦး ဆုံးအရာ၌ "မမျှော်လင့်ဘဲ" ဖြစ်ကြသည်。ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့、cryptocurrencies ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလဲလှယ်တန်ဖိုးကိုတည်ငြိမ်ရန်ဖြစ်သည်、အကြောင်းမှာယန္တရားသည်“ တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကိုကာကွယ်ရန်” ဖြစ်သည်။。တစ်နည်းဆိုရသော် "တောင်နိမ့်လျှင်နိမ့်သောချိုင့်ဝှမ်းသည်။ "。
encryption ငွေကြေးကို : Iron Titanium (TITAN) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို "alchemy" လို့ခေါ်တယ်။
TITAN အပြင်၊ Iron Finance လည်းရှိသည်、ကျွန်ုပ်တို့သည် Cryptocurrency ကျောထောက်နောက်ခံပြုတည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့ဖြစ်သော Iron Titanium (TITAN) ကိုထုတ်ပေးသည်။。ဒီသံမှာ、(1)ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း、၎င်းသည်တရား ၀ င်တင်ဒါကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောတည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့ဖြစ်သောအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။。
အမေရိကန်ဒေါ်လာဒင်္ဂါးပြား、1USDC = 1USD မှာ Fixed。1သံရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ、0.75USDC နှင့် 0.25 TITAN လိုအပ်သည်。ထိုအခါ、TITAN ကိုဘယ်လိုဝယ်ယူသလဲ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်。1တစ်ခုက、ဖလှယ်မှုတွင် TITAN ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း。နောက်တစ်ခုက、IRON နှင့် USDC တို့ကိုငွေသွင်းပါ、TITAN ကိုအတိုးအဖြစ်မည်သို့လက်ခံမည်နည်း။。
(1)"TITAN ကိုရယူပါ (လဲလှယ်မှာ)" → "1IRON အတွက် 0.75USDC + 0.25TITAN"> "IRON နှင့် USDC ငွေဖြည့်ပါ" → (2) "TITAN (အတိုးအဖြစ်) ရယူရန်" "" "0.75USDC + 0.25TITAN အတွက် 1IRON" လဲလှယ်ခြင်း ဘို့ "...
ဒီမှာဘာအရေးကြီးတယ်、အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငွေလဲလှယ်မှုအချိုးသည်ဆက်စပ်နေသည်、ဒါဟာအမြဲ "1IRON = 1USDC" ဖြစ်ပါတယ်。
တစ်နည်းပြောရရင်တော့、2ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အပြီးသံသရာ၌တည်၏、USDC ကို ၂၅% လျှော့စျေးဖြင့်အခမဲ့ TITAN ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။。နောက်ထပ်、USDC, တစ် ဦး Fiat ကျောထောက်နောက်ခံ stub အကြွေစေ့、အစစ်အမှန်ငွေကြေးဒေါ်လာနှင့်တူညီသောတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်。
အကယ်၍ IRON တစ်ခု၏အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ဒေါ်လာ ၁ ထက်ကျော်လျှင်、သင်အဲဒါကို cryptocurrency ဈေးကွက်မှာရောင်းနိုင်ပါတယ်、၎င်းသည်ထိုးကျသော်လည်း USDC သို့လဲလှယ်ခြင်းဖြင့်သင်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာရနိုင်သည်。
ဒါကလုံခြုံပြီးလုံခြုံတယ် “ဝိဇ္ဇာ “ပြီးတော့、Iron Titanium (TITAN) ၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုတွန်းအားပေးခြင်း。မူလ、1TITAN တစ်ခုစီသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၂၅ ဖြစ်သင့်သည်、"alchemy" ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်အရောင်းအ ၀ ယ်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်。ဒေါ်လာ ၆၄.၁၉ အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးငွေလဲနှုန်းထက်အဆ ၂၅၀ ထက်မနည်းရှိခဲ့သည်。
တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့၏တည်ငြိမ်မှုဒဏ္stabilityာရီကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သောဓာတုငွေကြေး : Iron Titanium (TITAN) ဘာကြောင့်ဒေဝါလီခံရတာလဲ။
Alchemy cryptocurrency : Iron Titanium (TITAN) ဘာကြောင့်ဒေဝါလီခံရတာလဲ။ ဒါဟာတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားမှထူးခြားသော "တည်ငြိမ်မှု" ၌ရှိ၏。တရားဝင်ငွေပေးချေမှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောအဓိကအကြွေစေ့ဖြစ်သော USDC ၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုဒေါ်လာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်、USDC အော်ပရေတာသည်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုကိုင်ဆောင်ထားရမည်。ဤသည်တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြား၏ "တည်ငြိမ်မှု" ဖြစ်ပါတယ်。
Alchemy cryptocurrency : အဘယ်ကြောင့် Iron Titanium (TITAN) ဒေဝါလီခံသွားတယ်
အလားတူပင်、Iron Finance သည် IRON ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုမ္ပဏီ၊、IRON ၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကို USDC နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်、USDC ကိုင်ထားရမည်。သံဘဏ္USDာရေး USDC ၏ကုန်ဆုံးသောအခါ、သင်သည် IRON ကို USDC သို့လဲလှယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ。အကယ်၍ IRON ၏စျေးနှုန်းသည် ၁ ဒေါ်လာနှင့်အထက်ဖြစ်ပါက、ကိုင်ဆောင်သူများကအိုင်ရွန်ကိုဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာနှင့်အထက်စျေးနှုန်းများဖြင့် cryptocurrency ဈေးကွက်တွင်ရောင်းလိုကြသည်、ပြFinanceနာမရှိပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Iron Finance လက်အောက်ရှိ USDC သည်ကျဆင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး。
သို့သော်、စျေးနှုန်း $ 1 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသွားသည့်အခါ、Holder က USDC ကိုရွေးရန် IRON operating ကုမ္ပဏီကိုတောင်းဆိုသည်。သို့သော်、စျေးနှုန်း $ 1 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျဆင်းသွားသည့်အခါ、ပိုင်ရှင်က USDC ကိုရွေးရန် IRON လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတောင်းဆိုသည်။、IRON Finance ၏ USDC ကျဆင်းသွားသည်、ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါရွေးနှုတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်。ဒီယန္တရားကိုသိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ、ဘယ်အချိန်မှာ TITAN ၏စျေးနှုန်းကျဆင်းစတင်သည်、TITAN ကိုချက်ချင်းရောင်းပြီး USDC သို့ IRON ကိုလဲလှယ်ပါ。
တကယ်တော့、IRIT သည် TITAN ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကိုလက်ခံရရှိသည်、6မတ်လ ၁၇ ရက်တွင်အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် ၀.၆၅ ဒေါ်လာသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။。မူလ、ဤလေယာဉ်ပျက်ကျမှုကို "၇၅ ဆင့် USDC နှင့် ၂၅ ဆင့် TITAN သံတစ်ခု" အတွက်ရွေးနုတ်နိုင်သည်、Iron Finance သည် "TITAN ၏စျေးနှုန်းသည်သုညသို့ရောက်ရှိသွားပြီ"、ငွေသားမရှိတော့ပါ。
Iron Finance သည်သမိုင်းဝင်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်、"ကျနော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရာ、ခေတ်သစ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ cryptocurrencies အပေါ်တစ် ဦး ကသမိုင်းဝင်ပြေး、၎င်းသည် protocol အတွက်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သည် "ဟုသူကအခြားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့အွန်လိုင်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။、ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှအမျက်ဒေါသဝယ်ယူ。
သံဘဏ္financeာရေးသည်ထွန်းသစ်စဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်သည်、တန်ဖိုးမရှိဖြစ်လာသည့် TITAN ၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ (ယန်း ၂၂၀ ဘီလီယံခန့်) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။、၎င်းသည် Bitcoin ကဲ့သို့သောအဓိကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးထက်သေးငယ်သည်။。
ဒါ့အပြင်、TITAN အရောင်းအဝယ်သေးသေးဖြစ်ကြသည်。ဒါ、စျေးနှုန်းမြင့်တက် $ 0,25 ၏မူလတန်ဖိုးပြန်ရောက်လျှင်、ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းရနိုင်လို့ပဲ။。ဒါပေါ့、၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားမည့်ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်、ဒေဝါလီခံသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုသို့မဟုတ်ထီကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်အထူးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။。
Bitcoin, crypto ပိုင်ဆိုင်မှု၏ရှငျဘုရငျ(BTC)အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်(PayPal)ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေသည်စျေးကွက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးဘဏ္marketာရေးဈေးကွက်ကိုတွန်းအားဖြစ်စေသည်
Bitcoin, ဘဏ္industryာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲတဲ့ cryptocurrency、2017ယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်မှ ၂၀၁၈ ပထမနှစ်ဝက်အထိလူကြိုက်များမှုနှင့်လူကြိုက်များမှုတိုးလာသည်
အခု Bitcoin ဆိုတဲ့နာမကိုမကြားဖူးသေးဘူးလား။
2020Bitcoin သည်ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၄ တွင်စံချိန်တင်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်
Bitcoin ဇယား Bitcoin သည်ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်
ငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီကြီး Paypal(PayPal)စတော့စျေးနှုန်းသည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်ဖြစ်သည်、အစဉ်အဆက်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းကို updated
Bitcoin, crypto ပိုင်ဆိုင်မှု၏ရှငျဘုရငျ(BTC)Paypal ၏ငွေပမာဏမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ငွေရေးကြေးရေးစျေးကွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အကြီးဆုံးငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်(PayPal)
PayPal(PayPal)၂၀၂၀၊ နို ၀ င်ဘာ ၁၂ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သီးသန့် virtual virtual trading စတင်ခဲ့သည်、စတော့စျေးနှုန်း ၁၇% မြင့်တက်
ထို့အပြင် NASDAQ သည်နည်းပညာစတော့အိတ်ချိန်းတွင် ၆.၅% နှင့် S & P500 တွင် ၃.၅% မြင့်တက်ခဲ့သည်။
PayPal(PayPal)ထိုအခါ、4ကျွန်တော်တို့ဟာအမျိုးမျိုးသော virtual ငွေကြေးအမျိုးအစားများကိုကိုင်တွယ်
Bitcoin、Ethereum、Bitcoin ငွေသား、4 ဒင်္ဂါးပြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူ、2021ယခုနှစ်အစမှာ、PayPal(PayPal)ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီ ၂၆ သန်းခန့်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောကြောင့် virtual ငွေကြေးဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်
၀ န်ဆောင်မှုအသစ်အစတွင် PayPal ၏ငွေစက္ကူအမြောက်အများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်စတော့စျေးနှုန်းများမြင့်တက်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
(1)ယခုအချိန်အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် virtual ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုသည်တက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည်။、ငွေပေးချေမှုအတွက် "ငွေကြေး" အဖြစ် function ကိုကန့်သတ်ခဲ့သည်
(2)PayPal(PayPal)သငျသညျကို virtual ငွေကြေးအမျိုးအစားများသုံးပြီးစျေးဝယ်အကောင်အထည်ဖော်လျှင်、ငွေပေးချေမှုကိုအလွန်တိုးတက်လိမ့်မည်
(3)ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအကြွေးဝယ်ကဒ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော MasterCard နှင့် VISA、ကို virtual ငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခိုင်မာစေ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအကြွေးဝယ်ကဒ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော MasterCard နှင့် VISA တို့သည် virtual ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်
လေ့လာသုံးသပ်သူအချို့、Bitcoin စျေးနှုန်းများမြင့်တက်မှုသည် Paypal ၏အလားအလာအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုပြောဆိုသည်
ပြောင်းပြန်、Paypal သည် Bitcoin အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်သည်ဟုမကြာသေးမီကအချက်အလက်များအရသိရသည်။、PayPal သည်အသစ်တူးသော Bitcoins များ၏ ၇၀% ကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
PayPal(PayPal)Is、2021ယခုနှစ်အစတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ virtual ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့ရန်စီစဉ်နေပါသည်
ကုမ္ပဏီ၏ Daniel Schulman(ထိုအ Schulman)စီအီးအို、PayPal ကပြောကြားရာတွင်၎င်းသည်ဗဟိုဘဏ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကိုစတင်မထောက်ပံ့မီအချိန်သည်ကိစ္စသာဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
Square နှင့် Paypal တို့သည်ကောင်းမွန်သော cryptocurrency ဈေးကွက်ကိုမောင်းနှင်ကြသည်
စမတ်ဖုန်းများအတွက် "Cash App" ပိုက်ဆံအိတ်အက်ပ်ကိုလည်ပတ်စေသော Square,、Bitcoin-related အရောင်းတတိယသုံးလပတ်အတွင်း $ 1 ဘီလီယံစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်
သို့သော်ငြားလည်း、PayPal ကအောက်တိုဘာလတွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အစီအစဉ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်、ဘာလို့လဲဆိုတော့မျှော်မှန်းထားတာထက် ၀ ယ်လိုအားကပိုများတယ်、မူလစီစဉ်ထားသည်ထက်အစောပိုင်းဝန်ဆောင်မှုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ Bitcoins များအတွက်ဝယ်လိုအားမှာလည်းပြင်းထန်သည်။ Chicago Mercantile Exchange (CME) bitcoin အနာဂတ်ဈေးကွက်တွင်စံချိန်တင်တိုးတက်မှုများတွေ့ကြုံနေရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက Bitcoin ကိုထပ်မံမြင့်တက်စေလိုကြသည်、အဆိုပါ uptrend ၏ဆက်လက်、အနာဂတ်၌ကျယ်ပြန့်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြောင့်ထိခိုက်လိမ့်မည်
Visa ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဲဖရက်အက်ဖ်ကယ်လီသည်ယခင်ကငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်、"Bitcoin စျေးကွက်သည် ၀ င်ရောက်လာသူအသစ်များနှင့်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ " "cryptography ၏အနာဂတ်သည်သေချာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ "
Cryptocurrency လေ့လာဆန်းစစ်、ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့လက်လီပိုက်ဆံတွေက Bitcoin ဈေးကွက်ထဲကိုစီးဝင်သွားလို့ပဲ、လက်ရှိတိုးတက်မှုအားကျန်းမာရေးအခြေအနေဟုဖော်ပြထားသည်။
Square နှင့် Paypal, အမေရိကန်၏အဓိကငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှု、၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ချင်းရန်ပုံငွေများကို Bitcoin သို့စီးဝင်ရန်လမ်းကြောင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။
Corona ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်၏ကူးစက်ရောဂါသည် Bitcoin စျေးနှုန်းများအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်(ကိုဗစ် 19)Bitcoin စျေးနှုန်းနှင့်အတူ Pandemic ၏ဆက်စပ်မှု
coronavirus အသစ်၏ကူးစက်ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသကဲ့သို့။、မမျှော်လင့်သောဖြစ်ရပ်များသည် cryptocurrency trading အပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
မတ်လတုန်းက Corona ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာတဲ့အချိန်、စျေးနှုန်းကိုတစ်ရက်တည်းတွင်နှစ်ဆလျှော့ချခဲ့သည်、ထိုအချိန်မှ စ၍ တိုးတက်လာသောအရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်အားဖြည့်ခဲ့သည်
Bitcoin ယခုနှစ်၏အစအ ဦး ကတည်းကအတော်လေးမြင့်တက်ခဲ့သည်
2020၂၀၁၄ နို ၀ င်ဘာလ ၂၄ ရက်တွင်ယာယီဒေါ်လာ ၁၉,၁၀၀ ထက် ကျော်လွန်၍ နောက်ထပ်အာရုံစိုက်မှုကိုပြုလုပ်သော Bitcoin
virtual ငွေကြေး (crypto ပိုင်ဆိုင်မှု) ပူဖောင်းများ၏ဆင်တူစျေးနှုန်းများတိုးမြှင့်မှုကြောင့် Bitcoin အာရုံကိုပြန်လည်ဖြစ်ပါတယ်
Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည်、2020၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်ယန်း ၁.၂ သန်းကျော်အသုံးပြုမည်、ထိုအရပ်မှထဆက်လက်、2020၎င်းသည်နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင်ဒေါ်လာ ၁၉,၁၀၀ ကိုယာယီချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၁၉,၁၀၀ ကို ဖြတ်၍ နောက်ဆုံးအချိန်သည်ဇန်နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈ ဖြစ်သည်။、2၅ လအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း (နေ့စဉ်ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း)、Coincheck အရ)
စက်မှုလုပ်ငန်း၏ရှေ့တန်းတွင်တက်ကြွစွာခဲ့သူတစ် ဦး အဖြစ်、2020ငါထင်သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အဘိုးပြတ်ယခုနှစ်ရဲ့အစကတည်းကထင်ကြေးမှပိုင်ဆိုင်မှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
Bitcoin [စံချိန်မြင့်မားသောအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်](BTC)သက်တမ်းတိုးသောဒေါ်လာ ၅၆၀၀၀ သည်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ cryptocurrencies များအတွက်နွားစျေးကွက်သည်သီတင်းပတ်၏အစအထိဆက်လက်တည်ရှိမည်လော။ altcoin တက်လိမ့်မည်နည်း
Bitcoin(BTC)သက်တမ်းတိုး $ 56,000 မှာအမြင့်ဆုံးစံချိန်
Bitcoin စျေးနှုန်း $ 56,368 ၏အမြင့်သစ်တစ်ခုတာမျိုး、ကမ္ဘာပေါ်ရှိတန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများအနက်နေရာတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်。
Bitcoin, အကြီးဆုံးကို virtual ငွေကြေး(BTC)Is、၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင်နယူးယောက်ခ်တွင် ၇.၇% တိုးမြှင့်ခဲ့သည်、အကြောင်းကို $ 52.332 ရောက်ရှိခဲ့သည်。ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်ငါးကြိမ်ထက်ပို、2021၂၀၁၄၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ အမှတ်ရခဲ့တယ်။。
အမေရိကန်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ Tesla ကဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြေငြာခဲ့သည်、အမေရိကန်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ MicroStrategy,、ဒေါ်လာ ၆၀၀ မီလီယံမှ ၉၀၀ မီလီယံတန်ဖိုးရှိမူလကွေငြာထားသောကွေးလှောင်ထားသောချေးငွေကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်、ကြောင်းပိုက်ဆံနှင့်အတူ Bitcoin(BTC)ဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်。
2021ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉, 2014 ယေဘုယျအားဖြင့် cryptocurrencies ၏စျေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက် $ 1 trillion ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။。
Bitcoin(BTC)စျေး $ 55.300 ထက်ကျော်လွန်、စျေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံသာရှိသည်
2021ဖေဖော်ဝါရီလ 19, 2014 နံနက်ကုန်သွယ်အတွက် Bitcoin(BTC)$ 55.300 ကျော်လွန်စျေးနှုန်းနှင့်အတူ、၎င်း၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံသာရှိသည်။。မြင့်တက်ပြီးနောက်ဆက်လက်、1နာရီအကြာတွင်ဒေါ်လာ ၅၆,၃၆၈ စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။。
BTC / USDT Binance4နာရီဇယားရင်းမြစ်:TradingView
Bitcoin(BTC)Amazon သို့မဟုတ် Google လား、ယခုတွင်၎င်းသည် Apple ကဲ့သို့နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပြီဖြစ်သည်、အစဉ်အလာဘဏ်များသည်ဖောက်သည်များအား Cryptocurrency အုပ်ထိန်းသူ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာသည်。
Nem(NEM / VIEW) Nicholas Perecanos "MicroStrategy သည်ကုမ္ပဏီ၏လက်ကျန်ငွေပမာဏကို Bitcoin သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။、တက်စလာမှလူကြိုက်များသောစီးဆင်းမှု "
Cryptocurrency Nem(NEM / VIEW)Nicholas Perekanos, ကုန်သွယ်ရေးဌာနမှူး(က Nicholas Pelecanos)"Bitcoin စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်။、အထင်ရှားဆုံး、ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သူ MicroStrategy စတင်ခဲ့သည်、တက်စလာမှလူကြိုက်များခဲ့သည်、အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ကိုငွေကြေးဖောင်းပွမှု၏ခြံအဖြစ် Bitcoin သို့ကော်ပိုရေးရှင်းချိန်ခွင်လျှာစာရွက်ရွှေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "、Nicholas Perekanos(က Nicholas Pelecanos)သူက。
US Tesla, Inc သည်ငွေစာရင်းကို Bitcoin သို့ပြောင်းလိုက်သည်
Nem(NEM / VIEW)ကုန်သွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲ Mr. Nicholas Perecanos(က Nicholas Pelecanos)
"MicroStrategy ဟာကော်ပိုရိတ်ချိန်ခွင်စာရွက်ကို Bitcoin သို့ပြောင်းရန်လမ်းကြောင်း၏အစဖြစ်သည်။、တက်စလာမှလူကြိုက်များသောစီးဆင်းမှု "
Bitcoin နှင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုရွှေ့သောရှေ့ဆောင် MicroStrategy
ယူအက်စ် software ကိုထုတ်လုပ်သူ、MicroStrategy Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်(BTC)ဝယ်ယူမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်ပြောင်းခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ထုတ်ပေး。2021ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊、Cryptocurrency bitcoin(BTC)ဝယ်ရန်、ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% ထုတ်ပေး convertible ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ပမာဏတိုးလာ。ကူပွန် 0% သို့လျှော့ချခဲ့သည်、ဒါက Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်(BTC)ဒါဟာစျေးကွက်ပေါ်မှာဖြောင့်လောင်းခြင်းကဲ့သို့တူညီသောပါပဲ။。
မင်္ဂလာပါ、စတော့ရှယ်ယာများဝယ်ယူခွင့်နှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောငွေချေးစာချုပ်အမျိုးအစားများကိုထုတ်ပေးသည့်ပမာဏ、2021၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင်ကြေငြာခဲ့သောဒေါ်လာသန်း ၆၀၀ မှဒေါ်လာသန်း ၉၀၀ သို့ (ယန်း ၉၅.၃ ဘီလီယံခန့်) သို့တိုးလာ、စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်。ဒါ့အပြင်、ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဝယ်လက်သည်、13ရက်အတွင်းဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ ထပ်မံဝယ်ယူရန်အတွက်ရွေးစရာတစ်ခုပေးခဲ့သည်。ပြောင်းလဲခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အပေါ်အတိုးငွေပေးချေမှုမရှိပါ、စုစုပေါင်းအကြောင်းကို $ 1 ဘီလီယံမြှင့်ရန်မျှော်လင့်ထား、ဤသည်လက်ရှိအဆင့်မှာ Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်(BTC)သင်ဝယ်ယူနိုင်သောပမာဏမှာယူနစ် ၂၀၀၀၀ ဖြစ်သည်。
MicroStrategy ရဲ့စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းဟာ ၆၀၀% တက်သွားတယ်။ !!
MicroStrategy ရဲ့ရှယ်ယာဈေးဟာ ၆၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တယ်
ဤအချိန်ပြscaleနာစကေး၏တိုးချဲ့、MicroStrategy ရဲ့ယခင် Bitcoin(BTC)ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အောင်မြင်မှုကိုပြော၏。ကုမ္ပဏီ、ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီလက်ပေါ်မှာငွေသားနှင့်အတူ Bitcoin(BTC)ဝယ်ယူမှုကိုစတင်ပါ、12လစဉ်ဘွန်းထုတ်ပေးမှုနှင့်အတူပို Bitcoin(BTC)ထည့်ပါ、ယခုအချိန်အထိစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်。၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၁ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် MicroStrategy သည်၎င်း၏ပထမဆုံးဝယ်ယူမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်、Bitcoin(BTC)စျေးနှုန်း ၃၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်。နောက်မှ、MicroStrategy ၏စတော့စျေးနှုန်းသည်ဖြစ်သည်、ဘာ 600% တိုး。
MicroStrategy သည်အမြတ်တိုးရန် cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အာရုံစိုက်သည်、"Bitcoin(BTC)"၀ ယ်ခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း" သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ၏ဒုတိယမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်。သတိပြုသင့်သည်、ဒီပြောင်းလဲနှောင်ကြိုးထုတ်ပေးရေးအကြောင်း、MicroStrategy မှတ်ချက်ပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်。
Bitcoin(BTC)အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုကြည့်、ကုန်သည်များသည် Bitcoin များဖြစ်ကြသည်(BTC)စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်ဟုသင်မထင်ပါ。
Bitcoin(BTC)တွစ်တာအသုံးပြုသူမည်မျှရှိသည်、1လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၂၅% တိုးလာခဲ့သည်、လူပေါင်း ၃၈၅၀၀ ကျော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်
TIE လေ့လာဆန်းစစ်သူ Trace Dahlem(Treyce Dahlem)အဆိုအရ、သော့ချက်စကားလုံးအဖြစ် "bitcoin" ပါဝင်သောလူမှုမီဒီယာအပေါ်စကားဝိုင်းများ、2မတ်လ ၁၈ ရက်မှစ၍ ၃၈% တိုးလာခဲ့သည်。
လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်းတွစ်တာပေါင်း ၁၀၂၀၀၀ ကျော်ကိုပေးပို့ခဲ့သည်။、ဒါ “စံချိန်တင်မြင့်မားသောချိုးဖျက်ဖို့ 30000 ထက်ပို “အကွာအဝေးအတွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်。
Bitcoin(BTC)tweets အရေအတွက်သည်စံချိန်တင်မြင့်တက်မှု ၃၈,၅၀၀ ကျော်လွန်ခဲ့သည်
ထိုအခါ Bitcoin(BTC)တွစ်တာအရေအတွက်သည် ၃၈၅၀၀ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ တွစ်တာအသုံးပြုသူအရေအတွက်、1ပူဖောင်းအခြေအနေသည်အပူလွန်ကဲမှုကြောင့်လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၂၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခြင်းကြောင့်ပူဖောင်းဈေးကွက်ပြန်လာသည်ဟုဆိုကြသည်။。
Dahlem ကိုခြေရာကောက်(Treyce Dahlem)"နေ့တိုင်း Bitcoin(BTC)တွစ်တာအသုံးပြုသူမည်မျှရှိသည်、1လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၂၅% တိုးလာခဲ့သည်、လူ ဦး ရေ ၃၈,၅၀၀ စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
DeFi နှင့် CeFi ၏ပေါင်းစပ်မှုစတင်သောအခါ Altcoin မြင့်တက်လာသည်
အကွိမျမြားစှာ altcoins、Bitcoin(BTC)နှင့် Ethereum(ETH)မှလိုက်ပါလျှက်、အစဉ်အမြဲအမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းသက်တမ်းတိုး、CeFi(ဗဟိုဘဏ္financeာရေး)DeFi နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)ဒါ့အပြင်၏လဲလှယ်တိုကင်၏အားကြီးသော breakout မှ、DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)နှင့် CeFi(ဗဟိုဘဏ္financeာရေး)Altcoin သည့်အခါမြင့်တက်လေ့ရှိတယ်。
DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)နှင့် CeFi(ဗဟိုဘဏ္financeာရေး)သည့်အခါပေါင်းစပ် Altcoin ထ
Binance အကြွေစေ့(BNB)Is、စမတ်ကွင်းဆက် Binance(BSC)ပမာဏ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်မြင့်တက်ခဲ့သည်。348.72ဒေါ်လာစျေးအသစ်တစ်ခုအမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်。
ဒီ parabolic ချီတက်ပွဲအားဖွငျ့ဖွစျသညျ、Binance အကြွေစေ့ (BNB)အဆိုပါ Bitcoin(BTC)နှင့် Ethereum(ETH)ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဈေးကွက်အရင်းအနှီးများအပြီးတွင်တတိယအကြီးဆုံးစီမံကိန်းအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်。
ပန်ကတ(ကိတ်မုန့်)ပြီးတော့ဗီးနပ်စ်(VXS)ထိုကဲ့သို့သော DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ、စမတ်ကွင်းဆက် Binance(BSC)၏ထိပ်တန်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်、$ 20,62 အသီးအသီး、101.50ဒေါ်လာစျေးအသစ်တစ်ခုအမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်。
ဒါ့အပြင်、Ethereum, blockchains များအကြားလှုပ်ရှားမှုခွင့်ပြုသောပွင့်လင်း protocol ကိုတိုကင်အဖြစ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုRen(ရန်း)မကြာသေးမီက binance စမတ်ကွင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်(BSC)ပေါင်းစည်းမှုအားဖြင့်、အဆိုပါလက္ခဏာသက်သေ $ 1.69 စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်、ဒါဟာပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်。
Nasdaq, NY Dow, S သည်အမေရိကန်စီးပွားရေးတွင် Corona ကပ်ရောဂါနှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတို့၏ဆိုးကျိုးများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်&P500 ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကဘာတွေလဲ။
Nasdaq, NY Dow, S သည်ယူအက်စ်စီးပွားရေးတွင်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်&P500 ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကဘာတွေလဲ။
သောကြာနေ့ရဲ့ရိုးရာစျေးကွက်、အဓိကအညွှန်းကိန်းအမြင့်ဆုံးတာမျိုးပြီးနောက်、ယူအက်စ်စီးပွားရေး၌ကူးစက်ရောဂါနှင့်အလုပ်လက်မဲ့ ဦး ရေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်、ဖရိုဖရဲအခြေအနေ၌တစ်ပတ်ပြီးဆုံးခဲ့သည်。
Nasdaq 0.07% မြင့်တက်ခဲ့သည်、နယူးယောက် Dow ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ခဲ့သည်。
S&P500 သည် ၀.၁၉% ကျဆင်းခဲ့သည်。
Bitcoin နှင့် Altcoin အပါအဝင်ယေဘုယျအားဖြင့် virtual ငွေကြေး၏နွားစျေးကွက်၏အရှိန်အဟုန်、ရက်သတ္တပတ်၏အစတိုင်အောင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်လော
အစဉ်အလာစျေးကွက်တစ်ပတ်၏အဆုံးရောက်ရှိအဖြစ်、Bitcoin(BTC)ထိုအခါ altcoin ၏အမြင့်ဆုံးနောက်ကွယ်မှအီရန်အရှိန်အဟုန်လျော့နည်းလာလက္ခဏာမပြနေသည်。
Bitcoin နှင့် Altcoin အပါအဝင်ယေဘုယျအားဖြင့် virtual ငွေကြေးများအတွက်နွားစျေးကွက်၏အရှိန်အဟုန်ကဘာလဲ?
မကြာသေးမီကသမိုင်းဆိုင်ရာဒေတာအရသိရသည်、2021ယခုနှစ် Bitcoin(BTC)မြင့်တက်ခြင်းသည်သီတင်းပတ်၏အစတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်、လေ့လာသုံးသပ်သူများစွာ、Bitcoin, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ထိပ်တန်း(BTC)တနင်္ဂနွေမှာဒေါ်လာ ၆၀,၀၀၀ အထိရမယ်ထင်တယ်。
အကြောင်းမှာ crypto ကဏ္ up သည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်、စျေးကွက်ဟာအမြဲတမ်းကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာတစ်နေရာရာကိုရွေ့လျားနေတယ်。
လက်ရှိနွားစျေးကွက်သည်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ကျယ်ပြန့်သောအာရုံကိုရရှိသောအခါ、စနေ၊ တနင်္ဂနွေကုန်သွယ်မှုပမာဏနိမ့်ကျခြင်းသည်အလုပ်မဖြစ်တော့ဟုထင်ရသည်。
Ethereum(ETH)စျေးဟာဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အောက်ရောက်နေပါတယ်、သို့တိုင် $ 1,974 ၏စံချိန်အမြင့်ဆုံးနှိပ်。
ETH 2.0 ကိုလောင်းခြင်းဖြင့်သင်ရရှိသောအမြတ်ငွေ、Ethereum(ETH)ခိုင်မာသည့် ၀ ယ်လိုအားတိုးချဲ့ခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားတက်ကြွစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တွန်းအားဖြစ်သည်。DeFi သည် ETH 2.0 ဖြင့်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)၎င်းတို့သည်ကဏ္inတွင်ပါ ၀ င်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်ဟူသောကြီးထွားလာသောခိုင်မာသည့်အသံဖြစ်သည်။。
Bitcoin သည် "Digital Gold" ဖြစ်လာပြီးပြီလား။
Bitcoin ကို "ဒီဂျစ်တယ်ရွှေ" အဖြစ်တည်ထောင်ပြီးပြီလား။
မကြာသေးမီက、Bitcoins များကို“ digital gold” ဟုမကြာခဏခေါ်ကြသည်။
Bitcoin、တိကျသောတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါသောပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားဖြစ်ခြင်း、ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပေးရေးကန့်သတ်အဖြစ်တူညီမှုကြောင့်、အချို့သောအလွှာများက၎င်းသည်“ ရွှေနှင့်ဆင်တူသည်” ဟုဆိုသည်
နောက်ကွယ်မှာ、Corona ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်、နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။?
2020ဖေဖော်ဝါရီလလယ်လောက်ကမှ、Coronavirus သည်အစစ်အမှန်စီးပွားရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်、စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သည်အမြီးအကျိတ်သို့ကျဆင်းသွားသည်
နောက်မှ、2020ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ကူးစက်ရောဂါကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။、စီးဆင်းမှုကပိုမိုအားကောင်းလာနေသည်、စတော့ဈေးကွက်သည်ထိုးကျသွားသည်
ဒါ့အပြင်、နှစ်ပေါင်းများစွာ coronavirus ပြန့်ပွားမှုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြားပွတ်တိုက်အားများလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ、2020၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်အဓိကကျသောငွေကြေးများစွာနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုဖော်ပြသောဒေါ်လာအညွှန်းကိန်းသည်နှစ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နိမ့်ကျခဲ့သည်။、ရွှေနှင့် bit ဒင်္ဂါးများ၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်
Bitcoin သည် "ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ" ဖြစ်နေပြီ
အဘယ်ကြောင့် Bitcoin (BTC) ကို“ Digital Gold” ဟုခေါ်သနည်း။
ဒါ့အပြင်、ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြာသေးခင်ကကျင်းပတဲ့သရဖူဆောင်းအခမ်းအနားမှာရွှေနဲ့ဆင်တူတဲ့ဈေးနှုန်းတွေအများကြီးရှိတယ်、Bitcoin ကို“ Digital Gold” ဟုခေါ်တွင်လာသည်။、Bitcoin ၏လူကြိုက်များမှုမြင့်တက်လာခဲ့သည်
ဒါ、ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Bitcoin လို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးထက်အတော်လေးပိုလုံခြုံတယ်လို့ထင်မြင်လို့ပဲ、အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု" အဖြစ်သာမက "ပိုင်ဆိုင်မှု" အဖြစ်ပါအာရုံစိုက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Bitcoin (BTC) သည် "ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ" မဖြစ်လာမီအချိန်သည်ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘဏ္Kingdomာရေးနိုင်ငံတော်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်ရှိသောဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များသည် Bitcoin ခေတ်အပိုင်း (၂) သို့ပြောင်းလဲနေကြသည်
ဆွစ်ဇာလန် DAVOS- ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်လုပ်ငန်း、ရှေးခေတ်မှချမ်းသာကြွယ်ဝသူတို့၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုကာကွယ်ပေးသောကြောင့်လူသိများသည်
ဆွစ်ဇာလန် DAVOS- ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်လုပ်ငန်း、ကြာရှည်စွာစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုကာကွယ်သည့်အတွက်လူသိများသည်、အချို့သောဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များက Bitcoin သည်ဆွစ်ဘဏ္financialာရေးကဏ္forအတွက်သင့်တော်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်
ထိုသို့သောဘဏ်များသည်လူနည်းစုဝင်ဖြစ်နေနိုင်သည်、၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ၊ ဇူးရစ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် SEBA Bank AG、အထွေထွေဘဏ်လိုင်စင်များအပြင်、ပြဌာန်းငွေကြေးချုပ်နှောင်ထား、Virtual ငွေကြေးသိုလှောင်မှု、၀ ယ်သည့်အချိန်တွင်နောက်ကျ။ တရားဝင်ငွေကြေးသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသော virtual ငွေကြေးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဒက်ဘစ်ကဒ်、မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှတဆင့် virtual ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစတင်ခဲ့သည်
ဆွစ်ဇာလန် SEBA ဘဏ်、ကျွန်ုပ်တို့သည် debit ကဒ်များနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပ်များမှတဆင့် virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Guido Bühler, ဆွစ် SEBA ဘဏ်၏စီအီးအို(Guido Buehler)မစ္စတာ၏အဆိုအရ、ဘဏ်သည် Black River Asset Management ဖြစ်သည်(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု)လည်းတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်
Guy Schwarzenbach(Guy Schwarzenbach)၎င်းကဲ့သို့သော Mr. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကငွေကြေးထောက်ပံ့သည်ဟုဆိုကြသည်။
Guy Schwarzenbach(Guy Schwarzenbach)မစ္စတာ၏အဆိုအရ、ဘဏ်သည် Black River Asset Management ဖြစ်သည်(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု)Guy Schwarzenbach ကိုတည်ထောင်သူ(Guy Schwarzenbach)သူအပါအ ၀ င်ဆွစ်ဖရန့်ငွေသန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀၃.၄ သန်းခန့်) ကိုသူအပါအ ၀ င်၊
Guy Schwarzenbach(Guy Schwarzenbach)မစ္စတာ、back-end API ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်
"SEBA အကြောင်းကျွန်တော်တကယ်မျှော်လင့်နေတာကတော့、ရွေးချယ်စရာများနှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျအပါအဝင်ခရက်ဒစ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ချေးငွေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ、ဒီဟာမကြာခင်စတော့မယ် "Guy Schwarzenbach က(Guy Schwarzenbach)ဟုပြောသည်
SEBA သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ပထမဆုံး Bitcoin ဖော်ရွေသည့်ဘဏ်မဟုတ်ပါ、Falcon Group သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်နည်းနည်းအကြွေစေ့စီမံခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်、ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (WEF) မှဘဏ္Headာရေးစနစ်၏အကြီးအကဲ Matthew Blake、ကို virtual ငွေကြေးအပေါ်နူးညံ့သိမ်မွေ့、ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (WEF) မှဘဏ္Headာရေးစနစ်၏အကြီးအကဲ Matthew Blake ကလိုင်စင်ရဘဏ်များသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်(Matthew Break)မစ္စတာ、ကို virtual ငွေကြေးအပေါ်နူးညံ့သိမ်မွေ့、အပြည့်အဝလိုင်စင်ရဘဏ်များသည်လမ်းကြောင်းသစ်မဟုတ်ပါ
Bitcoin Switzerland သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားသည်、ရည်မှန်းချက်မှာအစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုမှသည်ချေးငွေများအထိအရာရာကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်!
“ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကခြံစည်းရိုးကိုအသုံးပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်၊(Matthew Break)မစ္စတာပြည်နယ်
အလားတူပင်、ဆွစ်ဇာလန်၏ virtual ငွေကြေးစတင် Bitcoin Switzerland သည်လည်းဘဏ်လိုင်စင်လျှောက်ထားသည်、ရည်မှန်းချက်မှာအစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုမှဘဏ္fromာရေးအထိအရာရာကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်
"တခြားဘဏ်တွေလိုပဲဘဏ်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ကစစ်မှန်တဲ့ရှေ့ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်"、ဆွစ် Bitcoin(ဆွစ်ဇာလန် Bitcoin)Ian Simpson, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမှူး(မှ Ian Simpson)မစ္စတာက
ဒါပေါ့、၀ ယ်သူအားငွေသားအကောင့်ပေးခြင်း、ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံနှင့်အဓိကဒင်္ဂါးပြား、ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိက virtual ငွေကြေးများ၏အချည်းနှီးသောရောင်းအားကို enable သောအသေးစားအနာဂတ်နှင့်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ဒြပ်ထုတ်ကုန်များစတင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
ဘဏ္Kingdomာရေးနိုင်ငံတော်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်ရှိသောဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များသည် Bitcoin ခေတ်အပိုင်း (၃) သို့ပြောင်းလဲနေကြသည်
DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)entr ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘဏ္Financeာရေး：DeFi)、blockchain ကွန်ယက်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဘဏ္ecာရေးဂေဟစနစ်
Swiss SEBA ဘဏ်တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ、ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ、ထိုကဲ့သို့သောစင်္ကာပူဒေါ်လာအဖြစ်များစွာသောတရားဝင်ငွေကြေးအသုံးပြုခြင်း、Bitcoin、Ethereum、သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Stella Rumen အဖြစ်ကို virtual ငွေကြေးကုန်သွယ်နိုင်ပါတယ်
သင်သည် ၁၅ မိနစ်ခန့်ဖုန်းဖြင့်ဖုန်းဖွင့်နိုင်သည်။ သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါက、မင်းကဆွစ်ဇာလန်ကိုသွားစရာမလိုဘူးလို့ SEBA ရဲ့ CEO Guido Bühlerကပြောပါတယ်။(Guido Buehler)သူက
မိုက်ခရို PC ကို Raspberry ပိုင်(Raspberry Pi)အထက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောသင်၏ကိုယ်ပိုင် Lightning ကွန်ယက် node ကို run ပါ、သူ့ဟာသူ Libertarian ခေါ်ဆိုသော Black River Asset Management(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု)တည်ထောင်သူ Guy Schwarzenbach(Guy Schwarzenbach)သူ့အတွက်、Bitcoin ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်、ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်
Guy Schwarzenbach သည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်သည်(Guy Schwarzenbach)သူ့အတွက်、Bitcoin ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသောကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်
သူ、ငါ့ရဲ့ Bitcoin ကိုခိုးပြီးစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်တာကိုငါမစွန့်စားဘူး
Guido Bühler(Guido Buehler)မစ္စတာ "ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်、ကျနော်တို့ Defi ဖြစ်ကြသည်(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်ခြင်းငှါတတ်နိုင်။ "
Guido Bühler(Guido Buehler)မစ္စတာ၏အဆိုအရ、စတင်တည်ထောင်ထားသော SEBA သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှလွဲ၍ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝသူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။、၎င်းသည် blockchain startup အချို့ကိုလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည်
Guy Schwarzenbach(Guy Schwarzenbach)မစ္စတာ、Maker DAO မှလှုံ့ဆော်ပေးသောအရင်းအမြစ် DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) ပလက်ဖောင်းသည်、သူကနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ပြည်သူလူထုနှင့်လူသိများသော ၁% နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောဘဏ္infrastructureာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံကိုပေးနိုင်သည်ဟုသူကထပ်ပြောသည်။
ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်、ကျနော်တို့ DeFi ဖြစ်ကြသည်(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်ခြင်းငှါတတ်နိုင်။ "
မျှော်လင့်ပါတယ်、ထိုသို့သော DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်、စျေးကွက်ရင့်ကျက်အဖြစ်、စံချိန်စံညွှန်းတွေကသဘာဝကျကျထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
နှင့် Guy Schwarzenbach(Guy Schwarzenbach)မစ္စတာကိုစကားပြောနေတယ်
Ethereum Cryptocurrency(ETH)ဈေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာ ၇၀ ဘီလီယံကျော်လွန်ခဲ့ပြီးစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်
Ethereum (eth) သည်ငွေနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်、စျေးကွက်အရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၇၀ ထက်ကျော်လွန်နေသည်
ရန်ပုံငွေအသစ်သည် Ethereum ဖြစ်သည်(ETH)ငါတို့စုဆောင်းရန်အလျင်ရှိကြောင်းပြသသည်。
CoinMetrics အဆိုအရ Ethereum(ETH)အရင်းအနှီး t、ယခုအချိန်အထိဇန်နဝါရီလတွင် ၅၀% နီးပါးတိုးတက်ခဲ့သည်、700ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်。
ဒီဒေတာအရသိရသည်、Ethereum(ETH)အရင်းအနှီး t、2020ယခုနှစ်မတ်လတွင် "Black ကြာသပတေးနေ့" တွင်ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံအောက်သို့ကျဆင်းပြီးနောက်、3နှစ်ဆကျော်ခဲ့သည်。
နားလည်သဘောပေါက်စျေးကွက်အရင်းအနှီး、အဆိုပါ cryptocurrency နောက်ဆုံးကွင်းဆက်အပေါ်ပြောင်းရွှေ့သည့်အခါပေါ်မူတည်။、crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ထောက်ပံ့ရေး၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်。
Ethereum စုစုပေါင်းစျေးကွက်တန်ဖိုးရင်းမြစ် : က
သို့သော်、သဘောပေါက် ဦး ထုပ်နှင့်အတူ、သာဗဟိုလဲလှယ်အပေါ်ကုန်သွယ်、On- ကွင်းဆက်မရွှေ့သောဒင်္ဂါးပြားကိုစဉ်းစားလို့မရပါ。
ဒီအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်、ပျောက်ဆုံးသွားသောနှင့်စုဆောင်းမရသောဒင်္ဂါးပြားများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်、တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်နောက်ဆုံး On- ကွင်းဆက်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်ကတည်းကမြင့်တက်လျစ်လျူရှုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ。
ဒါ့အပြင်、တူညီသောအစီရင်ခံစာတွင်、110,000 Ethereum(ETH)Ethereum အထက်ပါကိုင်ထား(ETH)လိပ်စာအရေအတွက် ၅% မြင့်တက်ခဲ့သည်、ဒါဟာ ETH အတွက်ပိုက်ဆံအိတ် 1,241 လက်ရှိ $ 13.8 သန်းကိုကိုင်ထားကြောင်းထောက်ပြသည်။。
ဒီလိုမျိုး、က “အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ Ethereum(ETH)စတင်ဝယ်ယူနေသည် “ငါနိဂုံးချုပ်。
CoinMetrics 社「”အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ Ethereum(ETH)စတင်ဝယ်ယူနေသည် “」
Ethereum, Altcoin ၏ဘုရင်(ETH)စံချိန်တင်မြင့်တက်ချိုးနှင့် altcoin ကမ္ဘာကြီးကို ဦး ဆောင်နေသည်
Ethereum(ETH)ဦး ထုပ်တိုးတက်မှုနှုန်း၏သဘောပေါက်、ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Bitcoin(BTC)၏တိုးတက်မှုနှုန်းကိုကျော်လွန်ရန်ပုံရသည်、Glassnode、12မေလ ၁၅ ရက်အရ BTC ၏သဘောသဘာဝသည် ၂၀၂၀ အစတွင် ၅၀% အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။。
CoinMetrics အချက်အလက်များအရ、Ethereum(ETH)အလားတူကာလအတွင်း 85% တိုးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်。
Blockchain စင်တာ၏ Flippening အညွှန်းတွင်、8နှစ်ခုသော့ချက်ညွှန်းကိန်းအရသိရသည်、Ethereum(ETH)Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်(BTC)ကျော်သွားမည့်ခရီးသည် ၇၁% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်、ဒီညွှန်ကိန်းအတွက်အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်。
တူညီတဲ့အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ、Ethereum သည် Bitcoin သည်ငွေသွင်းငွေထုတ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအဝယ်အတွက်အရေအတွက်ထက်ကျော်လွန်နေသည်、ငွေပေးငွေယူပမာဏနှင့် node များအရေအတွက်သည် Bitcoin ၏ ၉၉% နှင့် ၉၇% အသီးသီးရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။。
အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ Wall Street တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Anthony Scaramouch မှဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောခြံရံရန်ပုံငွေ、Skybridge မြို့တော်、အသစ်တစ်ခုကို Bitcoin (BTC) ရန်ပုံငွေစတင်ရန်、ယူအက်စ်လုံခြုံရေးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူထံတရားဝင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်
ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်လွှာများအတွက်ပုံစံ D ကို、အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုတနင်္လာနေ့တွင် Securities and Exchange Commission ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ခဲ့သည်、"SkyBridge Bitcoin Fund L.P. " ကိုထုတ်ပေးသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး "SkyBridge Bitcoin Fund GP LLC" ကိုသက်ဆိုင်ရာပါတီအဖြစ်စာရင်းပြုသည်။
စာရွက်စာတမ်းအရသိရသည်、အဆိုပြုထားရန်ပုံငွေဖြစ်ပါတယ် “စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ “Skybridge သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၏ပမာဏကိုကြေငြာရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်、တစ် ဦး ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်
စုဆောင်းမှု SEC Reg ဖြစ်ပါတယ်. ကင်းလွတ်ခွင့်、တနည်းအားဖြင့် Skybridge Capital မှအဆိုပြုထားသည့် Bitcoin ရန်ပုံငွေသည်ဖြစ်သည်、အသိအမှတ်ပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသာရရှိနိုင်ပါသည်
ဒီလျှောက်လွှာက、Skybridge Capital မှ Bitcoin နှင့်သက်ဆိုင်သောစောင်ရန်းရန်ပုံငွေကိုစတင်ရန်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပထမအကြိမ်အကြောင်းကြားပြီးနောက်ရက်သတ္တခြောက်ပတ်ခန့်အပြီးတွင်တင်ပြခဲ့သည်
ဒါ့အပြင်、ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများ、ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းနည်းပညာ、ငွေပေးချေမှုနည်းပညာ、ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေး、အားလုံး (သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကုမ္ပဏီများ (crypto ဖလှယ်မှုအပါအ ၀ င်)
သင် Bitcoin နောက်ကွယ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသိသလား
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများက Bitcoin ၏နိဒါန်း、2020ယခုနှစ်၏အကြီးမားဆုံးပုံပြင်များထဲကတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
ဒဏ္fundာရီအရံရန်ပုံငွေမန်နေဂျာ Paul Tudor Jones、George Solos ၏ကွမ်တန်ရန်ပုံငွေ(အဖြစ်လူသိများ:ဆိုးရော့စ်ရန်ပုံငွေ)ဦး ဆောင်သူ Stanley Dracken Miller က、အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နံပါတ်တစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျော်ကြားသော Jim Kramer ကဲ့သို့သောနာမည်များသည် Bitcoin ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။、ယူအက်စ်ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုအပြန်အလှန်ဘဝအာမခံ(မက်ဆာချူးဆက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံကုမ္ပဏီ)ဗြိတိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Raffer Investment Company နှင့်(Ruffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ)ဤကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နေကြသည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီဘက်မှာ、မင်္ဂလာပါ(Micro မဟာဗျူဟာ)、ရင်ပြင်, Inc. (ရင်ပြင်)、ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကိုးခုမြောက် Bitcoin ကုမ္ပဏီ Propoker မှလည်ပတ်သောကနေဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Cypherpunk Holdings Inc.(cipher ပန့်ခ်)မကြာသေးမီလများအတွင်းငွေလက်ကျန်ကိုသိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့သည်
စကားမစပ် Cipher Punk Holdings သည်ကနေဒါစတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး“ Wasabi Wallet” နှင့်“ Samurai Wallet” တို့ကဲ့သို့သောသီးသန့်တည်ရှိမှုကိုအထူးပြု crypto ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုက်ဆံအိတ်လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်နေသည်။。တိုးတက်လာသောအိုင်တီနိုင်ငံ၊ လစ်သူနီးယားမှစီးပွားရေးသမားလည်းဖြစ်သည်、Antanas Guga, လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲချပ်ကစားသမား(Antanas Gouga)စီအီးအို
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုချက်ကို Skybridge Capital မှချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များတိုးများလာသည်။ “ အဖြေကနေရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောသဘောတူညီချက်မပေးလိုသောပြင်ဆင်မှု၏အဆုံးမဟုတ်လား။。
Cryptocurrency BTC စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၃၃၀၀၀ ထောက်ပံ့မှုအောက်နှင့် Bfinex ဘောင်းဘီတို ၅၀၀၀ ကျော်သည်
$ 31,000 အတွက်ထောက်ခံမှုစမ်းသပ်ဖို့ Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC)、7မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ဒေါ်လာ ၃၃၀၀၀ ထောက်ပံ့မှုအောက်。
တချို့ကုန်သည်တွေ、နောက်ထပ်ခြေလှမ်းမှာဒေါ်လာ ၃၁၀၀၀ ထောက်ပံ့ရန်ကြိုးစားမည်ဖြစ်သည်。
Bitcoin (BTC) သည်ဒေါ်လာ ၃၁၀၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုစမ်းသပ်သည်
Cointelegraph Markets Pro နှင့် TradingView တို့၏အချက်အလက်များအရ、BTC / USD သည်ဇူလိုင်လ ၈ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၃၂၀၀၀ အထိကျဆင်းခဲ့သည်。
ဒီကျဆုံးခြင်း、Bitcoin (BTC) သည်သိသာသောခုခံနိုင်မှုအဆင့်တွင်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀ ရှိသည်(ခုခံ)ငါဖြတ်သန်းလို့မရဘူး。ဒီကနေ、Bitcoin သည် Wykov ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏နောက်အဆင့်သို့ဝင်သည်、39,000ဒေါ်လာစျေးအနီးတွင်တက်နိုင်သည့် Bitcoin (BTC) အီလက်ထရောနစ်မြင်ကွင်းကိုကျော်လွှားရန်အန္တရာယ်ရှိသည်。
Cryptocurrency ကုန်သည် Michael van de Poppe(Michael van de Poppe)Is、"$ 33,000 ဆုံးရှုံးခြင်းအားဖြင့်、31,000ကျနော်တို့ $ 31,400 အထိတက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထား။ "
“နာမည်ကြီးကုန်သည် Michael van de Poppe(Michael van de Poppe)Is、ကျဆုံးခြင်းမစတင်မှီ "$ 33K range ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်、31ငါ ~ 31.4K ဒေါ်လာကိုကြည့်ပါတယ်။ "。
"$ 33K အကွာအဝေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်、31ငါ ~ 31.4K ဒေါ်လာ "BTC မှာရှာနေတာပါ / ဇူလိုင်လအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာမြင်ကွင်းဇယား 8 ရင်းမြစ်: MichaëlvandePoppe / တွစ်တာ
Cryptocurrency ကုန်သည် Michael van de Poppe(Michael van de Poppe)Is、"$ 33,000 ဆုံးရှုံးခြင်းအားဖြင့်、31,000ငါ $ 31,400 အထိတက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်။ "。
BTC / USD သည် Bitstamp ကိုဒေါ်လာ ၃၂,၄၉၀ ဖြင့်နိမ့်သည်、32,500ဒေါ်လာစျေးပတ်လမ်း、Volatility ကပြန်လည်နာလန်ထူနေဆဲအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသထားတယ်。
ဆောင်းပါးပို့စ်၏ထိုအချိန်က、ကွမ်းခြံကုန်း(ကွမ်းခြံကုန်း)မှာ $ 32.490 ၏အနိမ့်နှိပ်ပြီးနောက်、32,500ဒါဟာဒေါ်လာစျေးအကွာအဝေးမှာရွေ့လျားနေသည်。
Bitfinex(Bitfinex)နာရီအနည်းငယ်အတွင်းနေရာတိုမှာ ၁၆၀% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်
Cryptocurrency သတင်းစာဆရာ Colin Wu(Colin ဝူ)Is、Cryptocurrency လဲလှယ် Bitfinex、အမည်မသိဝေလငါးသည် BTC ၅၀၀၀ ကျော်ကိုတိုတောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်、သူကအရောင်းအဝယ်အသစ်ကိုနာရီအနည်းငယ်အတွင်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။。
ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Bitfinex အသုံးပြုသူ、ကျနော်တို့အနည်းဆုံး 5219 BTC ၏တိုတောင်းသောအနေအထားသတ်မှတ်ထားပါပြီ、1 BTC သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃၀၀၀ တန်လျှင်、1တန်ဖိုးရှိ $ 737 သန်း。
Bitfinex ရဲ့စုစုပေါင်းတိုတောင်းသောရာထူး、အကြောင်းကို2နာရီအတွက် 160% တိုး
Bitfinex BTC ဘောင်းဘီတို (အပြာ) vs. BTC စျေးနှုန်း (လိမ္မော်သီး). ရင်းမြစ်: TradingView
"ဒေတာ Mish ဒေတာအရ、13:00 ပေကျင်းအချိန်、အကောင့်တစ်ခု (သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု) သည် Bitcoin ကို Bitfinex ထံမှငှားရမ်းခဲ့ပြီးအလွန်တိုတောင်းသောအနေအထားသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု crypto ပိုင်ဆိုင်မှုသတင်းစာဆရာ Colin Wu ကပြောကြားခဲ့သည်။(Colin ဝူ)သတင်းပို့နေသည်。
15:03ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည် BTC စုစုပေါင်း ၅၂၁၉ ကိုချေးပြီး၎င်းအရေအတွက်မှာတိုးများနေဆဲဖြစ်သည်။。
အများစုမှာတိုတောင်းသောရာထူး unhedged နေကြသည်。
ဆောင်းပါးပို့စ်၏ထိုအချိန်က、Bitfinex ရဲ့စုစုပေါင်းတိုတောင်းသောရာထူး、အကြောင်းကို2နာရီအတွင်း 160% တိုးမြှင့်ခဲ့သည်。
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ、bybit နံပါတ်များက Bitfinex ဘောင်းဘီတိုများသည်ရှည်လျားသောရှည်လျားသော equilibrium တွင်ရှိနေကြောင်းပြသသည်。
Coin Telegraph သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ cryptocurrency သတင်းမီဒီယာ、6ကုန်သည်များ၏အပြုအမူသည်လတွင်လည်းအတက်အကျရှိသည်、6မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင်စျေးနှုန်းအသစ်ကျခြင်းကြောင့် BTC ၁၅၀၀၀ အတွက်လောင်းကြေးများရေနစ်ခဲ့သည်။。
နောက်တစ်နေ့、BTC / USD မှအသစ်ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ ဖြစ်သည်。
Bitcoin ဆိုတာဘာလဲ။ blockchain ဆိုတာဘာလဲ။ သတ္တုတူးဖော်ရေးဆိုတာဘာလဲ
Bitcoin ဆိုတာဘာလဲ။ Bitcoin ဆိုတာဘာလဲ။
Bitcoin (Bitcoin) ဖြစ်ပါသည်、အများဆိုင်ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုပြီး open source protocol အပေါ်အခြေခံပြီး peer to Peer(F2f)၎င်းသည်နားလည်သဘောပေါက်သောငွေပေးချေမှုဖြင့်ပေးပို့နိုင်သောငွေကြေးဖြစ်သည်
Bitcoin သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအနက် "King" ကဲ့သို့သောသင်္ကေတငွေကြေးဖြစ်သည်
blockchain ဆိုတာဘာလဲ။ blockchain ဆိုတာဘာလဲ။
block ကွင်းဆက် Bitcoin ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သင်တန်းတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်
အဓိကအားဖြင့် Bitcoin ၏ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြန့်ဝေလယ်ဂျာအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်တွေအတွက်နည်းပညာက
ဘလောက်、Bitcoin ၏အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော "ငွေပေးငွေယူအချက်အလက်" နည်းပညာကိုရည်ညွှန်းသည်။
ငွေသွင်းငွေထုတ်အချက်အလက်များ (သမိုင်း) ကို“ ငွေပေးငွေယူ” ဟုခေါ်သည်။、Block သည်အပြောင်းအလဲမျိုးစုံစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း block များကိုဆက်တိုက်သိမ်းဆည်းထားသည့်အခြေအနေကို blockchain ဟုခေါ်သည်။
crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ (virtual ငွေကြေး) ကိုပေးပို့သောအခါငွေသွင်းငွေထုတ်သမိုင်းဒေတာကို "ငွေပေးငွေယူ" ဟုခေါ်သည်、အရောင်းအဝယ်အချို့ကိုပါ ၀ င်သောပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို "ပိတ်ဆို့ခြင်း" ဟုခေါ်သည်။
သင်ကဘဏ်စာအုပ်စာအုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်、ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းကဲ့သို့ငွေသွင်းငွေထုတ်သမိုင်းသည် "ငွေပေးငွေယူ" ဖြစ်သည်။、ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းများစွာသိုလှောင်ထားသည့်စာအုပ်၏စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ "ပိတ်ဆို့ခြင်း" ဖြစ်သည်
အရောင်းအ ၀ ယ်အသစ်များကိုအသစ်စက်စက်လုပ်ထားသည့်လုပ်ကွက်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ကွက်များတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်စီးဆင်းမှုကို "အတည်ပြုခြင်း" ဟုခေါ်သည်။、လုပ်ကွက်အသစ်များအား "ကွင်းဆက်ကွင်းဆက်" အဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်ကွင်းဆက်တစ်ခုအနေနှင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။
(1) crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ (virtual ငွေကြေး) ကိုစလှေတျသောအခါ、ငွေပေးငွေယူအသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်
(2) အကွိမျမြားစှာသောအရောင်းအတ ဦး တည်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ပေါင်းစပ်နေကြသည်
မကြာခဏရှုပ်ထွေး、Blockchain နှင့် Bitcoin (BTC) သည်အတူတူမဟုတ်ပါ
block ကွင်းဆက်တစ်ဦးက、Bitcoin (BTC) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်းဖန်တီးခဲ့သောနည်းပညာနှင့်အတူ、Bitcoin (BTC) အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန်နည်းပညာ။
Bitcoin (BTC) အပြင်၊ များစွာသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ (virtual ငွေကြေး) သည်နည်းပညာအခြေခံအဖြစ် blockchain ကိုအသုံးပြုသည်။、blockchain ကိုမသုံးသောခြွင်းချက်များဖြစ်သော DAG (Directed Acyclic Graph) အမျိုးအစား crypto assets (virtual ငွေကြေး) ။
လုပ်ကွက်များကိုဖန်တီးခြင်းကွန်ပျူတာတွက်ချက်မှုများစွာလိုအပ်သည်、ဤတွက်ချက်မှုကို“ သတ္တုတူးဖော်ရေး” ဟုခေါ်သည်။
အသစ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ (virtual ငွေကြေး) သတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်ဆုအဖြစ်ထုတ်ပေးနေကြသည်、လုပ်ကွက်ကိုလျင်မြန်စွာနှင့်မှန်ကန်စွာထုတ်ပေးသောမိုင်းလုပ်သားအားပေးသည်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အကြီးစားသတ္တုတူးဖော်ရေးတွင်စက်တပ်ဆင်ထားသောစက်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုများစွာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်、ကိုယ့်ကိုကိုယ်တူးဖော်မည့်အစား、သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ရန်ပုံငွေနှင့်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုသာထောက်ပံ့ခြင်း、ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်တွက်ချက်မှုအရင်းအမြစ်များအရခွဲဝေများရရှိသော "တူးဖော်ခြင်း" ဟုခေါ်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။
blockchain ၏အင်္ဂါရပ်သည်၎င်းကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောနည်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။、Bitcoin အသုံးပြုသူအားလုံး၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသည်
အဆိုပါပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်ဒေတာဘေ့စကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရွယ်တူချင်းကွန်ယက်တစ်ဦးဖြန့်ဝေ Timestamp ကိုဆာဗာနှင့်ရွယ်တူချင်း၏အသုံးပြုမှုကိုကစီမံခန့်ခွဲသောယန္တရားရှိပါတယ်
အဆိုပါ bit နဲ့အကြွေစေ့ထက်အခြားကို virtual ငွေကြေးအတော်များများဟာတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းနည်းပညာအဖြစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်၏ဖွင့်ထား
အမျိုးအစား အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ | နိုင်ငံ / နိုင်ငံ(4) အာဂျင်တီးနား(1) အင်္ဂလန်(1) အီတလီ(1) အီဂျစ်(1) သြစတြီးယား(1) နယ်သာလန်(1) စင်္ကာပူ(1) ဆွစ်ဇာလန်(3) ဂျာမနီ(1) ပြင်သစ်(1) ပေါ်တူဂီ(1) ဟောင်ကောင်(1)ဇာတ်ကောင် | စီအီးအို / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အရင်းရှင်၊ ကျော်ကြားသူ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု(7) အဲဖရက် F ကိုကယ်လီ(အဲဖရက်ကယ်လီ) (1) အန်သိုနီ Scaramucci(အန်သိုနီ Scaramouch) (1) Brad Garlinghouse(သွေး Garling အိမ်) (1) ခရစ် Larsen(ခရစ် Larsen) (1) ဒံယလေက H Schulman(ဒံယလေက Schulman) (1) ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်(ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်) (1) Guido Buehler(Guido Buehler) (1) Guy Schwarzenbach(Geishwarzenbach) (2) Hailey Lennon(Haley Lennon) (1) မှ Ian Simpson(မှ Ian Simpson) (1) ဂျင်းမာ့ခ် Bonnefoux(Jean-Marc Bonuf) (1) Jim Cramer(Jim Kramer) (1) မBlဲဘလိတ်(Matthew Break) (1) Nikolaos Panigirtzoglou(Nikolaos Panigilt Zoguru) (1) ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်(ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်) (1) Stanley Printmiller(Stanley Dracken ကြေးမုံ) (1)စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ကော်ပိုရေးရှင်း | ကုမ္ပဏီ(6) Anderson က P.C. သတ်(ဥပဒေရုံး Anderson ကသတ်) (1) Black ကမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု LLC(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု) (2) Cypherpunk Holdings Inc.(cipher ပန့်ခ် Holdings က) (1) မီးခိုးရောင်စကေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ(မီးခိုးရောင်) (1) JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ(JP Morgan Chase) (2) မက်ဆာချူးဆက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံကုမ္ပဏီ(အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံ) (1) MicroStrategy ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း(Micro မဟာဗျူဟာ) (1) Ruffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ(Raffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) (1) SkyBridge Capital(Skybridge မြို့တော်) (1)ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | သုတေသန | သုတေသနဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း / နည်းပညာ / အခြေခံများ / ကုန်သွယ်မှု(3) RSI(1) လေ့လာသုံးသပ်သူ(2) Bitcoin(BTC) ဇယား(2)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် | ဖြစ်ရပ်များ / ဖိုရမ်များ / အစီအစဉ်(1) WEF(ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်) (1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုများ | နည်းပညာ / နည်းပညာ / အိုင်တီ / ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု(5) CashApp(1) နေ့(လေလံဇယားကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်) (1) F2f(အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု) (1) ပလက်ဖောင်း(1) block ကွင်းဆက်(2) သတ္တုတွင်း(1) သတ္တုတွင်းရေကန်(1) မိုဘိုင်း app(1) လျှပ်စီးကွန်ယက် node ကို(1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptocurrency ချိန်း / အရောင်းရုံး / ချိန်း / ပလက်ဖောင်း(3) Beaxy ချိန်း(Beak Sea Exchange) (1) Binance(Binance) (1) CME(ချီကာဂိုကုန်သွယ် Exchange) (1) Cross Tower(လက်ဝါးကပ်တိုင်မျှော်စင်) (1) DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) (1) OSL(OSL) (1) OTC(ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော) (1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်(11) BCH(Bitcoin ငွေသား) (1) BTC(Bitcoin) (10) ETC(Ethereum ဂန္ထဝင်) (1) ETH(Ethereum) (3) LTC(အလင်းရောင်အကြွေစေ့) (2) XLM(Stella Rumen) (2) XRP(တိတ်ဆိတ်) (1)အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသော(9)ဘဏ္financialာရေး | ငွေပေးချေမှုစနစ် / လွှဲပြောင်း / သိုက် / ငွေထုတ်(3) MasterCard(1) PayPal(1) ဗီဇာ(1) ရင်ပြင်(2) ဒက်ဘစ်ကဒ်(1)ဘဏ္economyာရေးစီးပွားရေး | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီး၊ ဘဏ္Productsာရေးထုတ်ကုန်များ၊(6) ETF(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု) (1) S&P 500(စံ & ညံ့ဖျင်းသည် 500 စတော့အိတ်ညွှန်းကိန်း) (1) SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်) (1) Wall Street(Wall Street) (2) ကွမ်တမ်ရန်ပုံငွေ(ဆိုးရော့စ်ရန်ပုံငွေ) (1) Cryptocurrency(1) ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ(2) ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ(2) တိုကင်(1) ကြီးစိုးမှု(1) ကုန်သည်(2) Nasduck(1) လက်ကျန်ငွေ(1) စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ(3) အစုစု(1) မတည်ငြိမ်မှု(1) အရှိန်အဟုန်ကုန်သည်(1) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ(1) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ(2) လုံခြုံရေး(1)ဘဏ္Economicာရေးစီးပွားရေးသတင်း | ကော်လံ / ခေါင်းစဉ်(3) စျေးနှုန်းကျဆင်းမှု / ကျဆင်းခြင်း / ကျဆုံးခြင်းသတိပေးချက်(1) စျေးနှုန်းများမြင့်တက် / မြင့်တက် / မြင့်တက်၏သတိပြုပါ(2) နယူး Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု(COVID-19) (1)ဘဏ္economicာရေးစီးပွားရေးမီဒီယာ | သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ / အသံလွှင့်လုပ်ငန်း / ဖြန့်ဖြူးရေး / မီဒီယာ / မီဒီယာ(1) Bloomberg(1)ဘဏ် | ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်း(3) SEBA(SEBA ဘဏ် AG) (3)
မော်ကွန်းတိုက် လရွေးပါ 2021ဇူလိုင်လ 2021ဇွန် 2021မေလ 2021ပြီလ 2021မတ်လ 2021ဖေဖော်ဝါရီလ 2021ဇန်နဝါရီလ 2020ဒီဇင်ဘာ 2020နိုဝင်ဘာ 2020အောက်တိုဘာ 2020ဖေဖော်ဝါရီလ 2020ဇန်နဝါရီလ 2019ဒီဇင်ဘာ
Virtual ငွေကြေး / altcoin အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
အများဆုံးတိုး / စျေးနှုန်းတိုးနှုန်းကို | အနိမ့်ဆုံး / စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုနှုန်း | အရောင်းအဝယ်အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်
Virtual ငွေကြေးအမှတ်တံဆိပ် / altcoin စာရင်း
cryptocurrencies နှင့် altcoins ၏စာရင်း
သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ / ရှင်းလင်းချက်
Cryptocurrency / ကို virtual ငွေကြေး | လက်ရှိစျေးနှုန်း / စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ်၊ ငွေပေးငွေယူပမာဏပမာဏ Real-time ranking – TOP10
Cryptocurrency / ကို virtual ငွေကြေး | လက်ရှိစျေးနှုန်း / စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ်၊ ငွေပေးငွေယူပမာဏပမာဏ Real-time ranking – TOP25
Cryptocurrency / ကို virtual ငွေကြေး | လက်ရှိစျေးနှုန်း / စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ်၊ ငွေပေးငွေယူပမာဏပမာဏ Real-time ranking – TOP50
Cryptocurrency / ကို virtual ငွေကြေး | လက်ရှိစျေးနှုန်း / စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ်၊ ငွေပေးငွေယူပမာဏပမာဏ Real-time ranking – TOP100
"ကမ္ဘာ့ Virtual ငွေကြေး၊ Cryptocurrency / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးအချိုးအစားသစ် New Media Portal Site"
အိုင်ယာလန် - အဇာဘိုင်ဂျန် - အာဖဂန်နစ္စတန် - အမေရိက(ယူအက်စ်အေ) - အာရပ် - အယ်လ်ဂျီးရီးယား - အာဂျင်တီးနား - အယ်လ်ဘေးနီးယား - အာမေးနီးယား - အင်ဂိုလာ - Antigua Barbuda - Andra - ယီမင် - ဗြိတိသျှ - မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် - အင်္ဂလန်(ဗြိတိန်) - အစ္စရေး - အစ္စလာမ် - အီတလီ - အီရတ် - အီရန် - အိန္ဒိယ - အင်ဒိုနီးရှား - ယူဂန်ဒါ - ယူကရိန်း - ဥဇဘက်ကစ္စတန် - ဥရုဂွေး - အီကွေဒေါ - အီဂျစ် - အက်စ်တိုးနီးယား - Eswatini - အီသီယိုးပီးယား - အီရီထရိ - အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ - သြစတြေးလျ - သြစတြီးယား - အိုမန် - နယ်သာလန် - ဂါနာ - Carbo Verde - Gaiana - ကာဇက်စတန် - ကာတာ - ကနေဒါ - ဂါဘွန်း - ကင်မရွန်း - ကိုရီးယား - ဂမ်ဘီယာ - ကမ္ဘောဒီးယား - မြောက်ကိုရီးယား - မြောက်ပိုင်းမက်ဆီဒိုးနီးယား - ဂီနီယာ - Guinea Bisau - ဆိုက်ပရပ်စ် - ကျူးဘား - ဂရိ - Kiribus - ခရူဂ - ဂွာတီမာလာ - ကူဝိတ် - ကွတ် - ဂရီနာဒါ - ခရိုအေးရှား - ကင်ညာ - အိုင်ဗရီကို့စ်ကွတ် - ကော့စတာရီကာ - ကိုဘို - Comoro - ကိုလံဘီယာ - ကွန်ဂို - ဆော်ဒီအာရေဗျ - ဆာမိုအာ - Santome နိယာမ - ဇမ်ဘီယာ - စန်မာရီနို - ဆီးရီးယားလီယွန်း - ဂျီဘူချီ - ဂျမေကာ - ဂျော်ဂျီယာ - ဆီးရီးယား - စင်္ကာပူ - ဇင်ဘာဘွေ - ဆွစ်ဇာလန် - ဆွီဒင်နိုင်ငံ - ဆူဒန် - စပိန် - Sulinum - သီရိလင်္ကာ - စလိုဗက်ကီးယား - ဆလိုဗေးနီးယား - Seychelles - အီကွေတာဂီနီ - ဆီနီဂေါ - ဆားဘီးယား - စိန့်ခရစ္စတိုဖာ Nevis - စိန့်ဗင်းဆင့် - Grenadine ကျွန်းများ - စိန့်လူစီယာ - ဆိုမာလီယာ - ဆော်လမွန်ကျွန်းစု - ထိုင်းနိုင်ငံ - တာဂျစ်ကစ္စတန် - တန်ဇန်းနီးယား - ချက် - ချဒ် - ဗဟိုအာဖရိက - တရုတ် - တူနီးရှား - ချီလီ - မင်္ဂလာပါ - ဒိန်းမတ် - ဂျာမနီ - သွားရန် - ဒိုမီနီကာ - ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုသမ္မတနိုင်ငံ - Menistan torque - ကြက်ဆင် - တွန်ဂါ - နိုင်ဂျီးရီးယား - Naul - နမီးဘီးယား - နီယို - နီကာရာဂွာ - နိုင်ဂျာ - ဂျပန် - နယူးဇီလန် - နီပေါ - နော်ဝေး - ဘာရိန်း - ဟာအီတီ - ပါကစ္စတန် - ဗာတီကန် - ပနားမား - Banuatsu - Bahama - ပါပူဝါနယူးဂီနီ - ပလောင် - ပါရာဂွေး - ဘာဘေးဒိုးစ် - ဟန်ဂေရီ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - အရှေ့တီမော - ဖီဂျီ - ဖိလစ်ပိုင် - ဖင်လန် - ဘူတန် - ဘရာဇီး - ပြင်သစ် - ဘူဂေးရီးယား - Burkina Faso - ဘရူနိုင်း Darussalam - ဘရူဂျီ - ဗီယက်နမ် - ဘီနန် - ဗင်နီဇွဲလား Bolivar - ဘီလာရုစ် - ဘေလီဇ် - ပီရူး - ဘယ်လ်ဂျီယံ - ပိုလန် - ဘော့စနီးယား - ဟာဇီဂိုဗီးနား - ဘော့ဆွာနာ - ဘိုလီးဗီးယား - ပေါ်တူဂီ - ဟွန်ဒူးရပ်စ် - မာရှယ်ကျွန်းစု - မာဒါဂက်စကာ - Malaui - မာလီ - မော်လတာ - မလေးရှား - မိုက်ခရိုနီးရှား - တောင်အာဖရိက - တောင်ဆူဒန် - မြန်မာ - မက္ကစီကို - Mauritius - Mauritania - မိုဇမ်ဘစ် - မိုနာကို - မော်လ်ဒိုက် - မော်လ်ဒိုဗာ - မော်ရိုကို - မွန်ဂိုလီးယား - Monte Negro - Jordan Hashimite - လာအို - လတ်ဗီးယား - လစ်သူယေးနီးယား - လစ်ဗျား - Lichtenstein - လိုက်ဘေးရီးယား - ရိုမေးနီးယား - လူဇင်ဘတ် - ရဝမ်ဒါ - Resoto - လက်ဘနွန် - ရုရှား
©မူပိုင်ခွင့် 2020 - 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Virtual ငွေကြေး / Cryptographic ငွေကြေး / နိုင်ငံတကာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ဝဘ်ဆိုက် ｜ GVMG – ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
လီဒိုသည် အီသာကို လောင်းကစားခဲ့သည်။(STETH)$4,184.481.73%